NYI LYNN SECK 18+ DEN: April 2010
ဒီနေ့ အသက် သုံးဆယ် ပြည့်တယ်။ ထွေထွေထူးထူး ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပာဘူး။ ပထမတော့ အမှတ်တရ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ခုခု လုပ်မလားလို့ စိတ်ကူးမိသေးတယ်။ ဒာပေမယ့် သူငယ်ချင်း အဖွဲ့တွေက များနေတော့ အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်တယ်။ စာပေလောက (၂)မှာ စာအုပ် သွားဝယ်တယ်။ အပြင်မှာ ပူလွန်းလို့ အိပ်ယာထဲခွေပြီး စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီနွေကတော့ နွေတောင် ပီပီပြင်ပြင် မဟုတ်သေးဘူး အတှောလေး ပူတယ်။ ရေကြောင်းသိပဿပံ တက်နေတုန်းက အပူလှိုင်းဖြတ်တဲ့ ကာလတွေကို သွားသတိရမိတယ်။ ပြီးတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသက နေ့လည်ခင်းတွေကို သွားသတိရမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဘဝရဲ့ တစ်ဝက်တာ ကာလကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ အသက်တွေ သိပ်မရှည်ချင်ပာဘူး။ သေရင်လည်း အလုပ်တွေ လုပ်နေရင်း သေသွားချင်တယ်။ တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ရှိနေတာက ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေရတာထက် အဓိပဿပာယ် ပိုရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်က ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်မိတော့ ကိုယ်တှောတှော ပြောင်းလဲသွားတာ သတိပြုမိလိုက်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းလည်း ပိုသိလာတယ်။ လူတွေအကြောင်း ပိုနားလည်လာတယ်။ ဒီကာလမှာ ကိုယ်တစ်ခာမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့ဖူးတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို တှောတှော လေ့လာဖြစ်တယ်။ တှောတှောလည်း စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ ကိုရဲ ပြောသလိုပဲ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုမှာ တိုးတက်လာပေမယ့် တိတိကျကျ မှတ်နိုင်စွမ်းအား မှာတော့ ကျဆင်းလာတယ်။ တခာတခာ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေရဲ့ နာမည်ကို မေ့နေလို့ မနည်းစဉ်းစား ယူရတယ်။ ဆုံးပားသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း တချို့အကြောင်း ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ သူတို့တွေ အေးချမ်းရာကို စောစောစီးစီး ရသွားတာလား၊ အသစ်က ပြန်စနေကြ ရတာလား ဆိုတာလည်း တွေးမိတယ်။ ကိုယ့်မှာတော့ ဘဝ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကြီးကြီးမားမား သိပ်မရှိပာဘူး။ တိုးတက်လာတဲ့ အသစ်အသစ် ပှောလာတဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေမိတယ်။ မနှစ်က ခရီးအတှော သွားဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း သွားခွင့်ရရင် သိပ်ကောင်းမယ်။ အဲဒီတွေကို ရောက်သွားရင် အတွေးသစ် အမြင်သစ် စိတ်ကူးစိတ်သန်း အသစ်တွေ ရလာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှင်နေသရွေ့ အလုပ်တော့ လုပ်နေရမှာပဲ။ FB မှာ Wish လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပာတယ်။
Posted by NLS at 4/29/2010 10:08:00 PM 30 comments Links to this post
Labels: Diary, Memoir
ငာ့အိမ်ကိုငာ တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့က
ဘယ်တော့မှ မရဘူး ဆိုတာတွေလည်း ရတယ်
ဘှောသာခွာ လပြည့်ဝန်းကိုလည်း ရတယ်
ဒီနေ့အဖို့ အတှောလေး ငာရလိုက်တယ်
ဘယ်တော့မှ မရဘူး ဆိုတာတွေ ရတဲ့နေ့က
ငာဟာရသလား မရဘူးလား ဆိုတာတောင်
ဆဲရေးသံ၊ နွားနို့၊ မူလီနဲ့ မီးရထားလက်မှတ်တွေပာ
သင်ဘယ်တော့မှ မရဘူး ဆိုတာကိုလည်း ငာရလိမ့်မယ်။
Posted by NLS at 4/26/2010 12:32:00 AM5comments Links to this post
Who's Who in Burma (2)
201. Khan, Fazal Mohamed (Contractor and Partner, The Indian Engineering Co., Sandoway)
202. Khoo, Hock Chuan (Mining Engineer, and Mining Geologist)
203. Khine, Dr. U Kyaw, L.M.P., (Son of the late U Tun Oo, Merchant of Akyab)
204. Khoo, Lock Chuan, B.A., (Cantab.), Barrister at Law
205. Khin, U Ba, K.S.M., T.D.M., (Deputy Commissioner, Hanthawaddy)
206. Kin, Dr. Ba, (Health Officer, Bassein)
207. Khin, U Thein, B.A., F.C.S., A.T.M., (Senior Assistant Chemical Examiner to the Government of Burma)
208. Kin, U Tha (High Court Advocate of Pyapon)
209. Sein Ko, Taw, C.I.E., I.S.O., K.I.H., (Examiner in Chinese, Burma, and retired Superintendent, Archaeological Survey, Burma Circle(
210. Kongo, K. Uyeyama
211. Kyaw, Maung, A.T.M., I.F.S.,
212. Kumaran, Dr. P. I., K.I.H., (Municipal Commissioner, Mandalay)
213. Kyaw, U (Barrister at Law, Tharrawaddy)
214. Kyaw, U Ba (Proprietor of Sakangyi Oilfields, in the Thayetmyo District)
215. Kyaw, Dr. San, A.T.M.
216. Kyin, U Ba, (Twinza and Advocate, Yenangyoung)
217. Kyi, U Tok, B.A., (Member of the Legislative Assembly)
218. Kyin, U Po, (Superintendent of Land Records)
219. Lamech, Rao Sahib Dr. Jerusalem Swamidian, L.R.C.P., L.R.C.S. (Edin.), L.R.F.P.S. (Glasgow), L.M., (Dublin), Civil Surgeon. Late Clinical Assistant, Royal London Ophthalmic Hospital. Royal Westminster Ophthalmic Hospital, Royal Central London Ear and Throat Hospital.
220. Lay, U Ba (Mill Owner, Wetwun, Maymyo Subdivision, Mandalay District)
221. Littlewood, Ronald Vernon, I.A.R.O., (Burma Land Records Service (Superior))
222. Lane, Major Charles Reginald Cambridge, M.C., K. G. O. (Lancers General Staff, Burma District)
223. Lord, Hugh Probyn Malet, Lieut.-Colonel, I.A., (Deputy Commissioner, Meiktila)
224. Leach, Frank Burton, B.A., I.C.S., (Commissioner, Pegu Division)
225. Lees, Leonard Martyn, INC.S.
226. Lloyd, Idwal Geoffrey, B.A., I.C.S., (Commissioner, Mandalay)
227. Lin, Maung We, B.A. (Cal.), K.S.M., I.E.S.
228. Lun, U (Landowner, A Burmese Buddhist)
229. Lwin, U Ba (Headmaster, Myoma Boys’ High School, recognized by the Government)
230. McCarthy, The Late Sir Frank, Kt., C.B.E., F.R.G.S.
231. Macdonald, Lieut.-Col. R.W., D.S.O., I.A., (Inspector General of Police)
232. McDonnell, Thomas Francis Robert (Senior Partner, Legal Firm of McDonnell, Clifton, and Hartnoll, Rangoon)
233. Morris, Austin, Robert, I.C.S., (Deputy Commissioner, Tavoy)
234. Macdowell, Kenneth MacLean (Executive Engineer, P.W.D., Minbu)
235. Millar, Eben Simpson (Agent, The Indo-Burma Pet. Co., Ltd., Yenangyoung)
236. Maricar, Esoof Naria (Landed Proprietor and Rubber Planter)
237. Maida, Hashim Mohamed (Private Engineer, and Architect)
238. Majid, Shaik Abdul (Chief Jailor, Thayetmyo Jail)
239. Mamsa, Mahomed Ismail (Managing Proprietor of the New Motor Stores)
240. Myiah, Mohamed Ali (Contractor, Maymyo)
241. Manook, Isaiah Nierses
242. Maracan, Esmail Ghani (Member of the Legislative Council, Municipal Commissioner, Akyab)
243. Martin, Arrakiel Carapiet, M. Inst. St. E. principal of the firm of A. C. Martin & Company Engineers, Builders, and Contractors.
244. Maung, U Khin, B.A., M.L.A.
245. Mariano, Victor Joseph (Partner, Rangoon Gazette, and British Burma Press)
246. Maung, U Maung (Member, Legislative Council, Toungoo)
247. Maung, U Maung, M.L.C., (Municipal Commissioner and Merchant Prince of Sagaing)
248. Maung (2), Maung E, B.A., (Barrister at Law, Advocate, High Court of Judicature, Rangoon)
249. Maung, U Lun, A.T.M., (Member of the Legislative Council, Rice Miller and Land Owner)
250. Maung, U On (Managing Proprietor of Messrs. U Po Kyin & Co.)
251. Maung, Dr. Thein, B.A. (Cal.) M.M.F. (Bengal), Member of the Legislative Council
252. Maung, U Thin (Optician and Proprietor, the Burma National Stores)
253. May, Maung Htoon (Managing Proprietor, Htoon May Brothers)
254. Maung, Maung Tun, E.A.C., (Headquarters Assistant, and 1st Additional Magistrate, Magwe)
255. Massink, Willem, Consul for Holland (Managing Director, Messrs. Massink and Co., Ltd.)
256. Menon, Capt. Chakyat Govinda
257. Me, Maung, C.I.E., I.S.O., K.S.M., (Deputy Commissioner)
258. Me, U, M.I.C., (Pleader, Pauk, Pokokku District)
259. Mahter, Gulam Mohamed Hashim, (Hony. Secretary the Rander Soortee Sunni Bhora Association, Rangoon)
260. Merrikin, Matthew Spencer (Commissioner of Police, Rangoon)
261. Morris, John Samuel (Superintendent of Tharrawaddy Jail)
262. Menon, Dr. Perumpulavil Radhakrishna, B.A., M.B., C.M., (Civil Surgeon, Pokokku)
263. Min, U Tun, T.D.M., F.R.C.I., (District Superintendent of Police, retired)
264. Ming, Li Sen (Acting Consul for China in Burma)
265. Min, Maung Kyaw, B.A., L.L.B., I.C.S., (Headquarters Assistant)
266. Mitra, Lalit Kumar, B.A., B.L., (Member of the Legislative Council, Assistant Government Advocate, High Court, Mandalay)
267. Modan, Mohamed Alli (Piecegoods, and General Merchant)
268. Mudaliar, R. Sundra Raju (Merchant, and Boat Owner)
269. Mudaliar, P. Thirunavukarasu, I.D.S.M., (Superintendent, Military Accounts Department)
270. Munshi, Jehangir Kaikhoshru Ardeshir, B.A., LL.B., M.L.C., Barrister at Law (Prominent Parsee Citizen of Rangoon, Member of the Burma Legislative Council, Member of the Rangoon Municipal Corporation, one of the Trustees fo the Rangoon University Trust Board)
271. Mya, U (Member of the Legislative Council, Member of the Burma Home Rule Party)
272. Mustikhan, Osman (Contractor and Managing Proprietor of Messrs. Osman Mustikhan & Co.)
273. Myaing, Mg., (Deputy Superintendent of Police, Yemethin)
274. Myin, U Kyi (one of the oldest descendants of Pegu,awasteland grantee, and rice mill owner)
275. MacColl, Alexander Malcolm (Imperial Police, Personal Assistant to the D.I.G. Railways and C.I.D)
276. Mall, Cassim Ebrahim (Proprietor, Messrs. Ebrahim Cassim Mall & Sons, Hardware Merchants, Bassein)
277. Naidu, Rao Bahadur Mallem Chengalvarayulu, M.L.A., F.R.A.S., M.R.A.S., F.T.S., Barrister at Law (Advocate of the Madras and the Rangoon High Court)
278. Naidu, A. Ramadasss (Assistant Protector of Immigrants and Emigrants, Rangoon)
279. Naidu, Gudala Venketreddy (Tobacco Merchant and Hony. Magistrate, Moulmein)
280. Nair, Dr. T. M., M.R.A.S. (Lond.), M.R.I.P.H. (Lond.)
281. Ngan, Saw Hoke (Rice and Paddy Merchant. Owner of Messrs. Saw Hoke & Sons Rice Mill, Yegyaw, Bassein)
282. Nge, U Moung (Son of U San Ya, late retired Extra Assistant Commissioner)
283. Ni, U Shwe (Pleader, Thayetmyo)
284. Ni, U, B.A., Barrister at Law (Advocate of the High Court of Judicature at Rangoon)
285. Nyo, U Maung (Burma Civil Service, retired)
286. Noo, Dr. M. Tha, A.T.M., K.S.M., (Civil Surgeon, retd)
287. Nyun, Capt. Kyaw, M.D., I.M.S., Mandalay
288. Noor, Syed M., (Honorable Magistrate, Municipal Commissioner. Founder and Managing Proprietor of Noor Brothers, Government and General Auctioneers, Valuers, Commission Agents and Contractors. Son of the Late Hajee Syed Shamsuddin)
289. Nyun, Dr. Saw (Licentiate Medical Practitioner)
290. Oh, U Bah, alias Ahmed Ulla, K.I.H., (General Merchant, Rice and Saw Mill Owner, Elephant Dealer, and Forest Lessee, Ela and Okkan)
291. Okabe, Yinchi (Manager, the Yokohama Specie Bank, Limited)
292. Oo, U Kyaw (Legal Practitioner, Pokokku)
293. Oung, The Late Honorable U May, M.A., LL.M., Home Member)
294. Otter, The Honorable Mr. Justice Robert Edward, M.C., Bar at Law
295. Ottley, Daniel Nernon William, B.SC. (Eng.) Assoc. M. Inst. C.E. Executive Engineer, P. W. D. Lashio
296. Pal, Ram Das, M.B., B.S.,(Medical Practitioner, Toungoo)
297. Palaniyappa, T.S.N., Chettyar (Banker and Money Lender)
298. Nasarwanji Nowroji Parakh, Dr., L.F.P. & S. (Glasgow), L.S.A. (London), Physician and Surgeon
299. Pe, U. Ba (Paddy and Timber Merchant. Vice President Sandoway Municipality)
300. Pe, U Ba, B.A., Member of the Legislative Council
301. Patel, Peshotan Dhujishaw, Barrister at Law
302. De Paulsen, Christian Ludvig Holten, B.SC., M. Inst. C.E. (Denmark), M. I. Struct. E., M.S.E., Consulting and Mining Engineer
303. Phelips, Denis Charles Prescot, I.C.S.
304. Patker, Shamrao Sakharam, B.A. Barrister at Law
305. Pe, U, B.A., (Burma Civil Service)
306. Pe, U Chit (Pleader and Landowner)
307. Pe, U Zaw, B.A., F.R.C.I., I.E.S.
308. Pe, U Hla (Director of Publicity to the Government of Burma)
309. Pe, U Yee (Payadaga, Twinzayoe)
310. Pe, U San (Member of Legislative Council. Pleader, and Rice Miller)
311. Petley, Charles Arthur
312. Pillay, P. Chinnasawmy Shunmugam (Advocate, High Court of Judicature, Rangoon)
313. Pillay, Rao Bahadur Dr. Pudupakkum Thoymon Sawmy (Retired Civil Surgeon and Honorary Magistrate, Rangoon)
314. Po, Dr. San Crombie, M.D., C.B.E., Bassein
315. Po, Maung Shwe, K.S.M., T.D.M., (Retired Extra Assistant Commissioner, Moulmein)
316. Pru, U Hla Tun, M.A., B.L., M.L.A., (Advocate of the High Court of Judicature at Rangoon)
317. Pratt, The Honorable Mr. Justice Henry Sheldon, M.A. Oxon. I.C.S., (Senior Puisne Judge of the High Court, Rangoon)
318. Pru, U Saw Hla (Barrister at Law)
319. Pu, U (Pleader, Member of the Legislative Council, Tharrawaddy)
320. Pyu, Tait Tin (Extra Assistant Commissioner, Mandalay)
321. Rafi, Mirza Mohamed (Barrister at Law, Member, Burma Legislative Council)
322. Rajagopal, Dr. Melamyur Mudaliar, L.M.P. (Madras), (Private Practitioner, Maymyo)
323. Rahmatullah, Khan Sahib Shaikh (Assistant Engineer, Public Works Department, Sandoway)
324. Rambux, Baboo Naitram (Contractor)
325. Ram Lall, Bishandas (Government Contractor, and Rice Miller)
326. Raphael, Raphael Abraham (Managing Partner, Messrs. A. Raphael & Sons)
327. Rau, Dr. Kuloor Uliya Ganapath, L.M.P., (Medical Practitioner, Rangoon)
328. Rauf, Mohamed Abdul, B.A., B.C.L. (Oxon), LL.D., (Dublin) Barrister at Law of Middle Temple
329. Rutledge, The Honorable Sir Guy, Kt., K.C., M.A., (Chief Justice)
330. Rhee, U Mra
331. Rose-Price, Commander, R.I.M., (Marine Transport Officer, Mandalay)
332. Rushall, Richard Boswell, M.B.E., (Proprietor, Rushall & Co., Stevedores and Contractors, Rangoon)
333. Sankaran, Chettyar, Agent, M.AR.AR. (Chattiar Firm, Bankers and Money Lenders)
334. Saha, Dr. Amarendra (Son of Babu Gagan Ch. Saha, and Sur Mokshada Moyi Saha)
335. Saing, Saw Lon, K.S.M., T.D.M (descended fromaruling family of Mong Pyin)
336. Saminathan, Chettyar (Proprietor of M. S. S. Chettyar Firm, Merchant Street, Toungoo)
337. San, U Ba, K.S.M., B.A., (District and Sessions Judge, Bassein)
338. Santos, de Walter St. John, B.A., B.E.S.
339. Sarin, Dr. Gurudatta (Pathologist, Civil Assistant Surgeon, General Hospital, Rangoon. Director of the Rangoon Clinical Laboratory)
340. Saini, Ram Sarup (Merchant, Contractor, and Seedgrower, Vice President, Maymyo Municipality)
341. Sein, Maung (Merchant and Contractor, Municipal Commissioner, and Chairman, Burman Labour Association)
342. Sean, Tan Gwan (General Merchant, and Rubber Planter)
343. Sein, John Maung (Pleader, Tavoyzoo)
344. Stevenson, Henry Louis, B.A., I.C.S., Commissioner
345. Scott, Francis William, B.A., I.C.S., (Deputy Commissioner, Thayetmyo)
346. Smyth, William John, B.A., I.C.S., (Deputy Commissioner, Sandoway)
347. Stephenson, Basil, O.B.E., M.C., (Agent, Imperial Bank of India, Rangoon)
348. Seng, Oon Kim, T.P.S., (Pleader, Prome)
349. Sein, U Ba (Member of the Legislative Council)
350. Simon, Dr. A. I., M.B., B.S. (Madras)
351. She, U Thet (Extra Assistant Commissioner)
352. Set, Maung (Deputy Account General, Burma)
353. Servai, I. Vellasawmy (Landed Property Owner)
354. Shain, Chew Whee (Merchant, Shipping Agent, Mill Owner, Landowner, and Mine Concessionaire)
355. Shain, Saw Kyaw (Manager of Messrs. Ban Leong Company’s Rice Mill at Kwanthe, Choungzon Township, Amherst District)
356. She, U Thet, A.T.M., T.P.S., (Hony. Magistrate and Landowner of Pyapon, and Proprietor of the Pyapon Electric Supply House)
357. Shu, U Kin (Jailor, Rangoon)
358. Singh, Dhana (Managing Proprietor, Indian Engineering Co., Builders, and Contractors)
359. Singh, Ganga (Government Contractor, Mandalay)
360. Singh, Hazara (Assistant Engineer, P.W.D. Mandalay)
361. Singh, Baijnath (Proprietor, The Nathsingh Oil Company, Ltd., Yenangyaung)
362. Singh, Dr. Makhan, M.C.P. & S., (Cal.), (Proprietor of the Pegu Medical Hall, Pegu)
363. Su, Tan Thean (A prominent Broker in Produce for Many European Firms in Rangoon)
364. So, U Ba (Advocate of the High Court of Judicature at Rangoon. Member of the Burma Legislative Council)
365. Solomon, Ebhraim David (Chief Jailor, Rangoon Central Jail)
366. Sooratee, Mohamed Adjim (Honorary Magistrate, and Chairmal, District Council, and District School Board, Tavoy)
367. Sooratee, Ebrahim Adjim (Rubber Planter, and Landed Proprietor)
368. De Sousa, Dr. Aleixo Mariano (Ophthalmic Surgeon Consul for Portugal at Rangoon)
369. Stewart, Clyve G., (Indian Police Service)
370. Subramaniam, Gopalakrishna Iyer (Sub Assistant Surgeon, Burma Railways Prome)
371. Suleman, U (Diamond and Hide Merchant, Government Contractor, and Proprietor of the Kadozeik Saw Mill, Mandalay)
372. Surty, Khan Sahib Mohamed Goolam Hoosain (Oil well owner and connected with the Burma Oil Co., for over thirty years)
373. Swan, Dr. Ung Cheng, L.M.P., (Private Practitioner, Rangoon)
374. #Steel Brothers & Co., Ltd.
375. Snow, Charles Alfred (Director of Public Instruction)
376. Smart, Stanley Boddington (Extra Assistant Commissioner, Burma)
377. Swithinbank, Bernard Winthrop, I.C.S., (Deputy Commissioner, Pegu)
378. Swan, Tan Gyoke (Merchant and Rice Miller)
379. Syam, Annada Charau, Dr., L.M.S., (Cal.), Civil Surgeon, Kyaukphyu
380. Swe, U Chit, M.A., Barrister at Law (Moulmein)
381. Tambe, C.K., (Barrister at Law, Son of Cassipillai)
382. Tarapore, Pheroze Kharsedji, Colonel, I.M.S
383. Taylor, Ralph Palmer (Marine Superintendent for Messrs. Bulloch Brothers & Co., Ltd.)
384. Tha, U Kan (Burma Civil Service)
385. Taing, Ah Leong Wee (Merchant)
386. Thet, U Khin (Proprietor of U Khin Thet Company, Mandalay)
387. Tha, Sir Po, KT., C.I.E., O.B.E., (Broker and Hony. Magistrate)
388. That, U Yaw (Chairman of the District Council, Yamethin)
389. Than Tin, U, B.A., (Under Secretary to the Government of Burma)
390. Than, Maung Ba, B.A., (Pleader)
391. Than, Maung Ba
392. Thoung, U Ba
393. Thaw, Alfred Ba (Captain, Indian Medical Service)
394. Thaw, U Ba, B.A., B.L., (Subdivisional Judge, Mergui)
395. Thein, Maung Aung (Proprietor of the Thein Gywe Brothers Printing Press, Prome)
396. Thein, Maung Ba, B.A., (Manager, U Maung Gyi & Co.)
397. Thein, U San (Member of the Legislative Council)
398. Thet, Maung (Pleader, Prome)
399. Thin, U Ba, K.S.M., B.A., B.C.S.
400. Thin, U Ba (Barrister at Law)
Who's Who in Burma (1)
Posted by NLS at 4/20/2010 08:59:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Biography, Book Review
Who's Who in Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ်က အတဿထုပဿပတဿတိ စာအုပ်လောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်ပာတယ်။ စာအုပ်ကို ပြုစုသူက မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံဟောင်း ဆာဟာကုတ် ဘတဿတလာ (61. Butler, Sir (Spencer) Harcourt) ဖြစ်ပာတယ်။ သူဟာ Lieutenant Governor အဖြစ်နဲ့ နှစ်ကြိမ်၊ Governor အဖြစ်နဲ့ တစ်ကြိမ် မြန်မာပြည်ကြီးကို လာရောက် အုပ်ချုပ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပာတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၂၇ ဇူလိုင်လလောက်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းပာတယ်။ အဲဒီခေတ်ကာလက မြန်မာပြည် တဝှန်းက နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ထင်ရှားခဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပာတယ်။ အလွန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် စာအုပ်တစ်အုပ်ပာ။
Ah Kine, Lai (Contractor)
Alexander, George Alexander Homfray (Deputy Commissioner of Income tax, Burma)
Adamson, John Walter (Deputy Commissioner)
Ahuja, Tickamdas Naraindas (Managing Partner of Messrs. D. A. Ahuja & Co. Hony. Magistrate)
Ahmed, Ebrahim, alias Be Shwe Mya, M.B.E. (Mergui)
Aik, Tan Teik (General Merchant)
Aiyengar, Ramaswami Gopala (Advocate)
Aiyar, Mylapore Ananthanarayan Sundara (Rao Bahadur)
Aiyar, Sivaramakrishna Virappa, B.A., B.L., (Barrister at Law)
Alagappa, V.R.A.L Chettiar (Agent)
Ameen, Dr. M. N., (Chief Medical and Health Officeer, M.Y.S. Jamals’ Firm)
Alibhai, Alijah Mahomed (Member of the Khoja Community)
Anderson, John, James, B.A., I.C.S., (Commissioner Tenasserim Division)
Anklesaria, Dr. Jehangir, Ardeshir, M.B., B.S., D.P.H, D.T.M., (Assistant Director of Public Health)
Aung, U Saw Hla (Member of the Legislative Council Pleader, Akyab)
Aung, U Hla (General Merchant. Commission Agent, and Landed Proprietor)
Arunachellam, N.S.A.R. Chettyar (Money Lender and Banker)
Aung, U Pe (Member of the Legislative Council, Rice Merchant, Mill Owner and Landed Proprietor)
Aung, U San, K.S.M., A.T.M. Headquarters Assistant and Additional District Magistrate, Akyab)
Aung, U Shwe Zan, B.A., K.S.M., A.T.M (District Superintendent of District, Akyab)
Auzam, Mr. Mahomed, M.L.C., (Bar at Law)
Ba, The Honorable Mr. Justice U., B.A., K.S.M (Judge of the High Court, Rangoon)
Baguley, John Minty, B.A., I.C.S., (District and Sessions Judge)
Baker, John Edward (Civil Service)
#Balthazar & Son, Ltd.
Ban, Khoo Sain (Chief Cashier of the Netherlands Trading Society, Rangoon)
Banerjee, Dhirendranath (Vakil)
Bannerji, M.M. (Public Prosecutor, Thayetmo)
Banerji, T. K., (Advocate, Public Prosecutor, Pakokku)
Baroni, J. R. J., (Burma Civil Service)
Basu, Rai Sahib Ashutosh (Assistant Secretary to the Government Finance and Revenue Department)
Baw, U Hla, I.S.O., K.S.M., (Sessions Judge, Retired)
Baw, U Kyan (Twinzayo)
Beadon, Major Vernon, M.C., I.A., (Deputy Commissioner, Magwe)
Bhoy, Akbar Ali, (Pleader, Thaton)
Bin, Dr. U Shwe, L.M.P. (Private Practitioner, Mandalay)
Beadon, Cornwallis, William, Roger, (Assistant Superintendent of Police, Lashio)
Bhansali, Dr. Narbheram Prabhudas, M.B., B.S., (Late Captain, I.M.S)
Bin, Saw Yone (Member of the Legislative Council, of Messrs. S. Hoke & Sons, Rice Millers, Bassein)
Bhymeah, Mr. Hajee Mahmood Esoof (Youngest son of the late Mr. Hajee Esoof Bhymeah)
Bisset, Ernest, Lt. Col., I.M.S., (Director of Public Health)
Black, B., M.D
#The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited, Rangoon
Booth Gravely, Walter, M.A., I.C.S., (Member of the Legislative Council)
Bose, Kshitish Chunder (Pleader and President, Insein Munieipality)
Boyd, Archibald Edward (Collector of Customs)
Brown, The Honorable Mr. Justice Harold Arrowsmith, B.A., Bar at Law, I.C.S
Britton, Charles, John, James, (Hide Merchant)
Bennison, John Jennings, I.C.S.
Batty, Archibald Douglas George Staunton, M.V.O., A.D.C. (Governor of Burma)
Browne, Charles Edward (Burma Civil Service, retired)
Bu, U Hla, (Contractor and Commission Agent)
Bu, The Honorable Justice U Mya, (Additional Judge, High Court of Judicature)
Butterfield, Lt. Col. Edward, I.A., D.S.O., (Member of the Legislative Council)
Bu, Maung Hla, B.A., (Advocate. Superintendent of King Edward’s Memorial High School, Chairman of the District Agricultural and Co-operative Societies, Member of the Text Book Committee, Member of the Secondary School Advisory Board)
#Burma Corporation, Limited
#The Burmah Oil Company, Ltd.
#Burma Railways Company. Limited.
#Bulloch Bros. & Co. Ltd.
Byan, Khoo Tun, (Pleader, Tavoy)
Butler, Sir (Spencer) Harcourt, G.C.I.E., cr. 1923; K.C.S.I., cr. 1911; C.S.I., 1909; C.I.E., 1901; I.C.S., D.Litt.; D.C.I.; F.R.G.S.; F.Z.S.; Honorable Life Member of the American Museum of Natural History; Kt. Of Justice, St. John of Jerusalem
Carlos, Dr. L. L., F.R.C.S.I. Dubl., L.R.C.P. & S. Edin., L.R.F.P. & S. Glas., etc.
Carr, The Honorable Mr. Justice William, I.C.S., (Judge of the High Court)
Charlton, James, (Indian Agricultural Service)
Cowasjee, Nanabhai Merwanji, M.A., (Barrister at Law, Advocate, High Court, Rangoon)
Crosthwaite, Bertram Maitland, V.D., M.L.C
Chye, Saw Bah, (Commission Agent and Proprietor of the Thu Damma Wadi Press)
Chain, Dr. Ba Than, B.A., M.B., CH.B. (Ed)
Chakko, Dr. C., M.B., (Private Practitioner, Rangoon)
Chan, Ong Boon, Sayagale, (Paddy and Sugar Candy Merchant, Proprietor of Sin Hock Seng & Co., Pyinmana, with branches in Toungdwingyi, Lewe, Ela, Kongyi and Yedashe)
Chari, Honorable Pundi Chetlur Desika, Vakil.
Chalmers, David Ferguson, I.C.S.
Chari, The Honorable Mr. Justice Parungavur Narasimha, B.A., B.L., Judge, High Court of Judicature at Rangoon.
Chari, Perungavur Srinivasa, B.A., B.L., Advocate, High Court
Cheng, Saw Chin, (Inspector of Schools, I.E.S.)
Chetti, Cuddalore Rockasawmi (Doctor)
Chit, U. Ba, (Superintendent of Land Records, Minbu)
Cho, Maung Ba, B.A., (Pleader)
Cho, U. E., T.D.M., (Superintendent, Government Translation Department)
Chong, Khen Beng (Member of the Legislative Council, Burma. Managing Proprietor, Heng Huat & Co.)
Chowdry, Abdool Baree (Rice Miller, Contractor, Khedda Licensee, Owner of steam Launches, Dockyards and Foundry, etc)
Chowdry, Santimay Ray (Advocate, Pyinmana)
Christiansen, Otto Honoratus (Stevedore)
Chor Khine, Mr. Chan, (The eldest surviving son of the late Chan Mah Phee the well known Millionaire, Merchant, Landowner and Philanthropist of Rangoon)
Crow, Dr. Charles George (Intlian Medical Department)
Christopher, Sydney Albert (Barrister at Law)
Clark, George Sampson
Chong, Tay Soo (Assistant Manager, Overseas Chinese Bank, Ltd)
Daing. U Sein (Barrister at Law, third Additional Magistrate)
Daniel, D. J., M.A. (Mad.), B.L. (Cal.), B.L. (Rangoon)
Das, The Honorable Mr. Justice Jyotis Ranjan (Bar at Law)
Duckworth, The Honorable Mr. Justice Edward Dyce, I.C.S., (Judge of the High Court of Judicature, Rangoon)
Daruwalla, Ahmed Sulaiman (Manager, Messrs. Jamal Brothers Cotton, Ginning, and Oil Mills)
Das, Bhupendra Nath, B.A., B.L., (Advocate of the High Court of Judicature, Rangoon)
Dawn, Walter Archibald William
Dawood, Adamjee, Hajee
Dey, Dr. Prabodh Kumar, M.B., CH. B. (Edin.)
Din, U Kyaw (Barrister at Law)
Don, Chan Soo (Member of the Legislative Council, Rubber Planter)
Doyle, The Honorable Mr. Justice John Patrick, B.A., Barrister at Law (King’s Inn, Dublin)
Dubern, The Honorable Mr. Jules Emile, O.B.E.,
Dun, U Ba (Deputy Government Advocate, and Secretary, Burma Legislative Council)
Dun, U Kyaw, T.P.S, Member of the Legislative Council. Advocate 2nd Grade.
Dutt, Surendra Nath (Pleader)
Engledue, Guy (Commander, R.I.M., Akyab)
Eggar, Arthur, M.A., (Cantub), Barrister at Law, Government Advocate, Burma
#Ellerman’s Arracan Rice & Trading Co., Ltd.
Emerick, B. R. (Field Superintendent, The Burma Oil Company Ltd.)
Esmail, Esmail Esooff (Merchant, Landed Proprietor, Managing Trustee, Hajee Mahomed Esooff Esmail’s Sparks Street Free Rest House, and Managing Trustee, Hajee Esooff Esmail’s Girls’ School, 28th Street Yangon)
Fenton, Colonel Alexander, I.M.S., Inspector-General of Civil Hospitals, Burma. Member of the Burma Legislative Council, President, Burma Medical Council, and Burma Midwives’ and Nurses’ Council.
Finlayson, Arthur James, Offciating I.E.S
Fuller-Good, Lt. Col. James, I.M.S.,
Foster, Thomas Oliphant (Architect)
Flowerdew, Major Richard Edward, B.B., ch.B. (Aberdeen). D.T.M. (Eng.), I.M.S.
Francis Medical Hall (Manufacturing Chemists)
Fyffe, Rt. Revd. Rollestone Sterritt, D.D., M.A., (Bishop of Rangoon)
Gale, U Maung (Member of the Legislative Council, Mandalay. Proprietor of Mannyun Rice Mill, and Donor of Mahaweyanbontha Kayungtaik Monasteries, A. Road)
Gale, U Tin (Personal Assistant to the Postmaster General, Burma)
Glay, U Lu (Gold Leaves Merchant, Municipal Commissioner)
Ghine, Moung Moung Ohn (Member of the Legislative Council)
Gaunt, Clive Herbert, I.L.B
Barnier, Robert (Pleader, and Notary Public)
Gangooly, B., (President Maymyo Municipality)
Gaung, Dr. U San, L.M.P., (Managing Proprietor of the National Medical Hall, B. Road, and Merchant Street, Mandalay)
Gautama, Mandhar Datta, M.B., B.S. (Punjab), (Medical Practitioner)
Ghosh, Charu Chandra (Entomologist, Agricultural College, Mandalay)
Ghine, Lim Oo (Mine Owner, Rubber Planter, and Merchant, Mergui)
Ghosh, Jitendra Kumar (Consulting Engineer)
Ghosh, Dr. S. K. (Homeopathic Physician, Naturopath and Psycho Therapist)
Gill, Robert Robson (Deputy Superintendent of Police)
Gosh, Raj Kumar
Giles, Sir Robert Sydney, KT., M.A., Barrister at Law, President of the Legislative Council)
Glascott, John Richard Donovan, C.I.E., Member of the Legislative Council, Agent, Burma Railways.
De Glanville, Oscar James Lardner, O.B.E., C.I.E., Member of the Legislative Council, Barrister at Law
Grant, Charles Frederick, M.A., I.C.S., (Commissioner, Magwe Division)
Gomez, Joseph Francis (Personal Assistant to the Commissioner, Magwe)
Grewal, Dr. Rajinder Singh, L.M.S (S’Pore.), Civil Asst. Surgeon.
Gyaw, Kyoungtagayi U Ya, Saw Mill Owner, Municipal Commissioner, and Honorary Magistrate
Gyee, U Maung, M.A., M.L.C., Bar at Law
Gyi, U Aung (Pleader)
Gyin, L Po (General Merchant, and Insurance Agent for Messrs. Steel Bros & Co., of Rangoon, and Purchase Agent to Messrs. The Arracan Co., for Upper Burma Produce.)
Gyi, Maung Ko (General Merchant and Broker, Pyinmana)
Gyi, Kwai Ba, alias Kwai Teong Kee (Land Owner, Banker, and Merchant, Rangoon and Maubin)
Gyi (2), U Aung, B.A., (Burma Civil Service, Headquarters Assistant, Hanthawaddy)
Gyi, Sir Joseph Augustus Maung, Kt., Barrister at Law, Home Member to the Government of Burma)
Gamble, Victor Felix, C.I.E. 1923. (Private Secretary to the Governor of Burma since 1923)
Gledhill, Alan, I.C.S., (Additional District and Sessions Judge, Tharawaddy)
Haldar, Basanta Kumar (Advocate)
Han, U Thein, B.A. (Cal.), Burma Civil Service.
Hamid, Mr. A., (Son of Mian Ghulam Mohamed Sadiq,aRice Merchant and Tea Exporter of Peshawar)
Haw, Aw Boon (Proprietor of the Eng Aung Ton (Tiger) Medical Hall
Han, Maung Ba, M.A., ph.D., Docteur d’ Universite, Barrister at Law.
Hnon, U Po, T.D.M., (Sub divisional Police Officer, Eastern Division, Mandalay)
Heald, The Honourable Justice Sir Benjamin Herbert
Edith, Lady Herald (Wife of the Honorable Sir Benjamin Heald and daughter of the Rev. John Bonser, B.A., of Nottingha,, Provincial Commissioner for Burma, Civil Guides Association; President, National Council of Women for Burma, and President, Young Women’s Christian Association, Rangoon, 1926.
Home, Walter, C.I.E., (Managing Director of Burma Railways)
Heath, Clement John (District Superintendent of Police)
Hla, U Aung, B.A., K.S.M., (District and Sessions Judge, Prome)
Hla (1), Maung (Deputy Superintendent of Police)
Hla, U Pan, A.T.M., (Extra Assistant Commissioner (Retired), President of the Akyab Municipality)
Hla, U Kyaw Zan (Additional District and Sessions Judge, Pyapon)
Hla, U Po, A.T.M., (Health Officer, Moulmein)
Hla, U Tin (Pleader)
Hlaing, U Kan, A.T.M., (Joint Registrar, Co-operative Societies, Rangoon)
Hoe, Ko Sit (Proprietor, Wetlu Rice Mill, Bassein)
Hong, Lee Woot (Rice Miller, and owner of the Wor Lee Lone & Co., Rice Mill and Kong Hip Saing of Rangoon)
Hopkins, Edward Dean Blanchard (Master Mariner)
Htat, U. Nyaung, alias Teoh Sit (Rice Miller, Rubber Planter and General Merchant, Mergui)
Htin, Saw Chin (Assistant Inspector of Schools, Rangoon Circle)
Htoon, U Ba, (Head Broker, Messrs. The Anglo –Burma Rice Co., Ltd., Rangoon. Hony. Treasurer, The Burma Swaraj Party, Rangoon. Advisory Committee Member, The Burma Provincial Co-operative Bank, Ltd., Rangoon)
Htoon, U. Mg. Tha, (Banker)
Htoon, U Kyaw (Barrister at Law, Son of U Htoon Aung, Merchant of Akyab)
#The Indo-Burma Petroleum Company, Limited
#Irrawaddy Flotilla Co., Ltd.
Inn, Khoo Jin (Manager, Overseas Chinese Bank)
Iyer, A. J., (Contractor and Government Auctioneer, Maymyo)
Iyer, A. Sami (Proprietor, The Indian Import Company, Rangoon)
Iyer, S.P.S., F.C.R.A. (Glasgow), F.I.P.A. (India)
Jackson, Eugene Wentworth Disney, M.C., B.A., B.A.I., A.M.I.C.E.I., (Executive Engineer, P.W.D., Minbu)
Jamal, J. A. K.,
Jan, Khan Saheb, M.A.
James, Dr. Michael, L.M.P., (Assistant Railway Medical Officer, Maymyo)
John, Dr. Stephen, L.C.P. & S., Pegu (Third son, and fourth child of Mr. and Mrs. P. C. John)
Jolly, Major Gordon Gray, C.I.E., Indian Medical Service
Jungalwalla, Kaikobad Temoolji
Kaka, C. V. Mohomed, (General Merchant, Maymyo)
Kar, U Po, (Vice President of the Toungoo Municipality)
Kasi, S. R. M. S. L. Chettyar (Son of Letchmanan Chettyar,awell known banker of Mogul Street, Rangoon)
Kathiresan, P. R. V. Chettyar (Agent, C. T. P. A. S. Chettyar, Bankers, Maymyo)
Kathiresan, S. A. S. T., (Agent, firm of S. A. S. T. Kathiresan Chettyar, Banker and Money Lender)
Kha, M. A. Rahman, alias Maung Kha (Proprietor of “The Beauties of Burma Face Powder Co.,” and the “Pyinsa Rupan Press”)
Keith, The Honorable Sir William John, KT., M.A., C.I.E., I.C.S.
Kirkwood, Lieut.-Col. Andrew Torton, O.B.E., (late of the Indian Army, Cantonment Magistrate’s Department)
Kendall, William (Deputy Agent, Burma Railways)
Kenny, Major Dick Edward Courtenay (Deputy Commissioner Pakokku)
Kheng, Ong Keat
Khan, Ahmed Golub (Twinza)
Kee, Lim Twa
Khin, Captain U Aung, M.B., ch.B., R.R.C.S. (Edin.), I.M.S.
Go to: Who's Who in Burma (2)
Remark: # အမှတ်အသားနဲ့ ပြထားတာတွေက လူပုဂဿဂိုလ်တွေ မဟုတ်ပာဘူး။
Posted by NLS at 4/19/2010 04:10:00 PM6comments Links to this post
ကုန်းဘောင်ခေတ် လူမျောက် မိသားစု နောက်ဆက်တွဲ
ကုန်းဘောင်ခေတ် လူမျောက် အကြောင်းကို ဖတ်ဖူးခဲ့တာ ကြာပာပြီ။ လူထုဒှောအမာ ရေးတာရော၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ရေးတာရော၊ ဦးစိန်မောင်ဦး ရေးတာရော၊ မြကေတု ရေးတာရော၊ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်) ရေးတာရော မှတ်မိနေပာတယ်။ ဒဂုန်ခင်ခင်လေးက စာဆိုတှော ဝတဿထုကြီးထဲမှာ၊ လူထုဒှောအမာက ဈေးကောက်လူမျောက် ဆောင်းပား၊ ဦးစိန်မောင်ဦးက လူမျောက်မိသားစုနှင့် သိပဿပံပညာ အမြင်၊ မြကေတုက လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်နှင့် သမီးမယ်ဖုံ၊ မောင်သန်းဆွေက ကုန်းဘောင်ခေတ်က လူမျောက်ရှင်းတမ်း စတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဖြစ်ပာတယ်။
လူထုဒှောအမာကတော့ ရေးထားတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တှောတှော့ကို တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိလှပာတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏဿဍာန် အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို စုံစုံစေ့စေ့ သိရပာတယ်။ ဒာပေမယ့် အဲဒီလူမျောက်တွေ နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ နောက်ပိုင်း ကိစဿစတွေတော့ မပာပာဘူး။ မြကေတု ရေးထားတာကလည်း အဂဿငလိပ်မှတ်တမ်းများနဲ့ နန်းတွင်း ပုရပိုဒ်ဖြူကို အဓိကထားပြီး ရေးထားတာပာ။ ဦးစိန်မောင်ဦးကတော့ သူတို့ဟာ တကယ်တော့ မျောက်တစ်ဝက် လူတစ်ဝက် မဟုတ်ဘဲ မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အမွေးအမျှင်တွေ ရှည်ထွက်လာပြီး ဒီလိုဖြစ်တာကြောင့် လူမျောက်လို့ မခှောဘဲ မွေးရှည်လူသားလို့ ခှောဖို့ကို တိုက်တွန်းထားတာပာ။ အားလုံးထဲမှာ အစုံလင်ဆုံးက လူထုဒှောအမာရဲ့ ဈေးကောက် လူမျောက် ဆောင်းပားလို့ ပြောလို့ ရပာတယ်။
ဆရာ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)က လူမျောက် ရှင်းတမ်းလို့ ရေးထားပေမယ့် တကယ်ကတော့ သူရိယ ရုပ်စုံသတင်းစာ အဟောင်း တစ်ခုထဲက အဲဒီအကြောင်းကို ပြန်ဖှောထုတ် ထားတဲ့ သဘောပာပဲ။ သူရိယကို အဲဒီသတင်း ရေးပို့သူက အဲဒီ လူမျောက်မိသားစု နဲ့ ဆွေးမျိုးနီးစပ် တှောစပ်တဲ့ ပင်စင် အငြိမ်းစား ဌာနအုပ် ဦးလှကြီး ဆိုသူရဲ့ မှတ်တမ်းကို ဦးနရိနဿဒ ကိုယ်တှောက ရေးသား ပေးပို့ခဲ့တာလို့ သိရပာတယ်။ ထူးခြားချက်က လူမျောက် ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းပာ။ ဒဏဿဍာရီ သိပ်ဆန်လွန်းအား ကြီးပာတယ်။ လူတိုင်းသိတဲ့ လောနိုင်ငံသား လူမျောက် ဦးရွှေမောင် မဟုတ်ဘဲ ဗမာစစ်စစ် ဦးဘမောင် မဟာမြိုင်တောထဲ ရောက်ပြီး ရေအိုင်တစ်ခုထဲ စိမ်မိရာက အမွေးတွေပောက်ပြီး မျောက်စိတ် ဖြစ်သွားတာမျိုးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆင်ထားပာတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက် နာမည်တွေကလည်း မတူကြတာကို တွေ့ရပာတယ်။
အထက်ကဟာတွေဟာ မြန်မာမှတ်တမ်းမှာဆို ကုန်သလောက်နီးနီးပာပဲ။ ဆောင်းပား တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကလည်း မတူကြတာတွေ၊ လိုနေတာတွေ၊ ပိုနေတာတွေ ရှိပာတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ အဲဒီအချက်တွေ အားလုံးကို စုစည်းပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင် နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ရေးသားချက်တွေကိုပာ ဖြည့်စွက် လေ့လာခဲ့ပာတယ်။ စရေးတဲ့ အချိန် ပုံတွေစစုဆောင်းတဲ့ အချိန်ကစပြီး အခုရေးချိန်အထိ ၆လကျှော ရှာဖွေလေ့လာ ခဲ့ပာတယ်။ ဒီဆောင်းပားရဲ့ အောက်ခြေမှာ လေ့လာခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ စာတမ်းတွေကို ဖှောပြထားပာတယ်။
ပုံ(၁) U Shwe Moung
ပထမဆုံး လူမျောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးရွှေမောင်ကို ၁၇၉၆ ခုနှစ်မှာ သံလွင်မြစ် (သို့) မုတဿတမြစ် ဘေးက လောနိုင်ငံ မိုင်းရုံးကြီးနယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ (ပထဝီ အခြေအနေနဲ့ အခှောအဝှောအရ အဲဒီဒေသဟာ အခု ထိုင်းနိုင်ငံထဲက Mae Yong ပဲဖြစ်ဖို့ များပာတယ်) အဲဒီဒေသကို အပိုင်စားတဲ့ စှောဘွား တစ်ယောက်က ထူးထူးဆန်းဆန်း အမွေးအမျှင်တွေနဲ့ ကလေးငယ်ကို မြန်မာဘုရင်ထံ အထူးအဆန်း လက်ဆောင် ပဏဿဏာအဖြစ်နဲ့ ဆက်သလိုက်တာမို့ သူ့အသက် ငားနှစ်သား အရွယ်မှာ အင်းဝဘုရင် ထံကို ရောက်လာပာတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အမွေးနုနုလေးတွေ ရှည်လျားစွာ ပောက်နေတယ်။ သူ့မျက်လုံး အသားအရေ ပုံစံ စတာတွေက မြန်မာတွေနဲ့ မတူဘူးလို့ ဆိုပာတယ်။ (ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ၁၈၂၆မှာ ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဂဿငလိပ် သံအဖွဲ့က ကရောဖို့(ဒ်) မှတ်တမ်းကို လူထုဒှောအမာ ဆောင်းပားထဲမှာ ဖတ်နိုင်ပာတယ်)
ရွှေမောင်ဟာ အဲဒီကတည်းက နန်းတွင်းမှာ ပျှောတှောဆက်အဖြစ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ မျောက်တွေလို ကပြ ဖျှောဖြေရပာသတဲ့။ သူ့မိဘတွေမှာရော သူတို့ မျိုးနွယ်စုထဲမှာပာ သူ့လို အမွေးအမျှင်တွေ မရှိဘူးလို့ သူက ပြောပာတယ်။ လူပျိုအဖြစ်ကို အသက်၂၀ အရွယ်မှ ရောက်ပာတယ်တဲ့။ အသက် ၂၂ မှာတော့ ဘုရင်က (ဘကြီးတှောဘုရား) သူ့ကို လှတဲ့ နန်းတွင်းသူ တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပေးပာတယ်။ သူတို့ ကလေး လေးယောက်ရခဲ့တယ်။ အားလုံးက မိန်းခလေးတွေချည်းပာပဲ။ နှစ်ယောက်ကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆုံးပားသွားခဲ့ပြီး တတိယ သမီးလေးက မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အတှော့ကို တူပာသတဲ့။ နောက်ဆုံး ၂နှစ်အရွယ် ကလေး တစ်ယောက်ကတော့ သူ့လိုပဲ အမွေးအမျှင်တွေနဲ့ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ အငယ်ဆုံး သမီးက ရွှေမောင်ရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံတဲ့ မဖုံး ဖြစ်ပာတယ်။ ကရောဖို့(ဒ်)ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ကိုရွှေမောင်နဲ့ သမီးမဖုံးရဲ့ပုံဆိုပြီး ဖှောပြခဲ့ရာမှာ ကိုရွှေမောင်ရဲ့ပုံက ဟုတ်ပေမယ့် မဖုံးရဲ့ပုံက မှားနေတယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ဟင်နရီနယူး(လ်)က ထောက်ပြခဲ့ပာတယ်။
ပုံ(၂) ကိုရွှေမောင်တို့ အကြောင်းကို ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူ John Crawfurd
ပုံ(၃) Ma Phoon
အဲဒီနောက် ၁၈၅၅မှာ အင်းဝကို ကပဿပတိန် ဟင်နရီယူး(လ်) ရောက်လာခဲ့ပာတယ်။ သူတို့ ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကိုရွှေမောင့်သမီး မဖုံးဟာ အသက် ၃၁အရွယ် ရှိနေပာပြီ။ သူ့ကို အီတလီလူမျိုး တစ်ယောက်က လက်ထပ်ပြီး နိုင်ငံခြားကို ခှောသွားဖို့ ကြိုးစားပာသေးတယ်။ ဒာပေမယ့် သီပောမင်းက ခွင့်မပြုခဲ့ပာဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ မဖုံးကို ဘုရင်ကပဲ သာမန်အရပ်သား တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုရပာမယ်။ ဟင်နရီယူး(လ်)တို့ လာရောက်ချိန်မှာ မဖုံးမှာ သားလေး နှစ်ယောက်တောင် ရနေပာပြီ။ ဦးရွှေမောင်ကတော့ လူဆိုးဓားပြတွေ သတ်ဖြတ်လို့ ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့ပြီလို့ သိရပာတယ်။ မဖုံးဟာလည်း သူ့အဖေ ဦးရွှေမောင်လိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို အမွေးရှည်တွေနဲ့ ဖုံးလို့နေပာတယ်။ မဖုံးကနေ သားသမီး သုံးယောက် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အဲဒီအထဲက မောင်ဖိုးဆက်နဲ့ မမိ တို့ဟာ မဖုံးလိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အမွေးတွေနဲ့ ဖြစ်ပာတယ်။
ပုံ(၄) ၁၈၅၅မှာ မဖုံးအကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သူ Sir Henry Yule (May 1, 1820 - December 30, 1889)
သူတို့မိသားစုဟာ သူတို့ကို အထူးအဆန်း လာကြည့်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဆီကနေ အခကြေးငွေကို ကောက်ခံပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှု ပြုခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ ကြည့်ရှုသူ တစ်ယောက်ချင်းစီကနေ ရူပီးငွေလေးဆယ် ယူတယ်လို့ သိရပာတယ်။
နာမည်ကြီး ဖျှောဖြေတင်ဆက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘာနမ်ဟာ ၁၈၇၁ ခုနှစ် ကတည်းက သူတို့ကို အမေရိကန်ခှောပြီး သူ့ရဲ့ (Greatest Show On Earth) ဆိုတဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲကြီးမှ ပြစားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒာပေမယ့် ဘုရင်က ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ၁၈၈၅မှာတော့ သီပောမင်း နန်းကျပြီး နန်းတွင်းရေးတွေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ မဖုံးတို့ မိသားစုဟာ နေပြည်တှောကနေ တောတွင်းတစ်နေရာကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ မောင်ဖိုးဆက်ဟာ မျက်စိ မကောင်းတော့တဲ့ မိခင် မဖုံးကို ကျောမှာပိုးပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ တောထဲမှာ သူတို့ ဒုကဿခ ရောက်နေစဉ်မှာပဲ သီပောမင်းထံမှာ အမှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အီတလီလူမျိုး အရာရှိ ကပဿပတိန် ပေပာနိုက (Captain Paperno) သူတို့ကို ရှာတွေ့ပြီး ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဥပရောကို ပို့ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပာတယ်။ ၁၈၈၆ ဇွန်လထဲမှာ မမိ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ အသက် ၂၃နှစ် အရွယ်လောက်မှာ ဖြစ်ပာလိမ့်မယ်။ ၁၈၈၆ နွေရာသီမှာတော့ သူတို့ကို လန်ဒန်မြို့ ပီကာဒလီ လမ်းပှောက Egyptian Hall မှာ ပြန်လည် တွေ့မြင်ရပာတယ်။
Ma Phoon (31yrs) and Moung Phoset (14months)
၁၈၈၆ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ မဖုံးနဲ့ မောင်ဖိုးဆက်တို့ အဂဿငလန်ကို ရောက်လာခဲ့ပာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မဖုံး အသက်က ၆၂ နှစ်လောက် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မျက်စိလည်း ကွယ်နေပာပြီ။ ဘာနမ်လည်း သူတို့ရှိရာ အဂဿငလန်ကို လိုက်လာပာတယ်။ သူ့အကြံက အမေရိကားမှာ စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ ပွဲထဲမှာ မဖုံးတို့ သားအမိ နှစ်ယောက်ကို ပြသဖို့ပာပဲ။ ဒာပေမယ့် သူ့ထက်အရင် လာပြီး စည်းရုံးနေတဲ့ အခြားသော ပွဲစီစဉ်နေသူတွေလည်း အဲဒီကို ကြိုရောက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘာနမ်ဟာ အခြားသူတွေပေးတဲ့ဈေးထက် အများကြီးပိုပေးပြီး (ယခုခေတ် ဒှောလာ ၂.၃သန်းလောက် ပေးရတယ်လို့ သိရပာတယ်) သူတို့မိသားစုကို ၁နှစ် စာချုပ်နဲ့ သူ့ဆီမှာ ပြသဖို့ သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပာတယ်။ မဖုံးနဲ့ သားဖြစ်သူ တို့ဟာ ၁၈၈၇ မှာ လန်ဒန်ကနေ ပြင်သစ်နိုင်ငံက နာမည်ကျှော Folies Bergere ကိုလည်း ရောက်သွားခဲ့ပာသေးတယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့ဟာ ဘာနမ်နဲ့ သဘောတူညီချက်အရ အမေရိကန်က ဘာနမ်ရဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲတွေမှာ လိုက်ပာ ဖျှောဖြေခဲ့ကြတယ်။
ပုံ(၅) မဖုံးတို့ကို အမေရိကားမှာ ပြစားခဲ့သည့် Phineas Taylor Barnum (July 5, 1810 – April 7, 1891)
စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီကာလ ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဖေဖှောဝာရီလမှာတော့ မဖုံးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝာရှင်တန်ဒီစီမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ ၁၈၅၅ ကပဿပတိန် ဟနရီယူး(လ်) လာတုန်းက သူမအသက်က ၃၁နှစ် ဆိုခဲ့တော့ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၄နှစ်လို့ မှတ်ယူရပာတယ်။ သူ့ဈာပနကို ဝာရှင်တန်ဒီစီ သခဿငျိုင်းမှာပဲ မြန်မာ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အတိုင်း သဂြဿငိုဟ် ခဲ့တယ်လို့ သိရပာတယ်။
မဖုံး ကွယ်လွန် သွားပေမယ့် မောင်ဖိုးဆက်ဟာ သူ့မိန်းမနဲ့အတူ ဆက်ပြီး ပွဲတွေ ပြသခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပာတယ်။ သူ့မိန်းမဟာ တချိန်က နန်းတွင်းအပျိုတှော တစ်ဦး ဖြစ်ပာတယ်။ မောင်ဖိုးဆက်ဟာ တစ်ကိုယ်လုံး အမွေးတွေဖုံးနေပေမယ့် ခားကနေစပြီး ဒူးအထိ မင်ကြောင်အပြည့် ထိုးထားတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဉာဏ်ရည်လည်း မနိမ့်ကျသလို ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တယ်လို့ J.J. Weir ဆိုသူကလည်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့တယ်။
မောင်ဖိုးဆက် အကြောင်း နောက်ဆုံး နောက်ဆုံး တွေ့ရတာက ၁၈၉၄ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ World's Columbian Dental Congress, Volume 1 မှာပာ။ အဲဒီအထဲက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ မောင်ဖိုးဆက်ကို ၁၈၉၁မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ သူ့ရဲ့ သွားတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပွဲစီစဉ်သူတွေက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပာတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
ဂျွန်ကရောဖို့(ဒ်) နဲ့ ဟင်နရီယူး(လ်) ရဲ့ မှတ်တမ်းကို အထောက်အထားပြု ရေးသားထားတဲ့ လူထုဒှောအမာရဲ့ ဈေးကောက် လူမျောက် ဆောင်းပားနဲ့ မြကေတုရဲ့ ဆောင်းပားတွေမှာ ထူးခြားတာ မတွေ့ရပေမယ့် ဦးစိန်မောင်ဦးရဲ့ လူမျောက်မိသားစုနှင့် သိပဿပံပညာအမြင် ဆောင်းပားမှာတော့ ထူးခြားတာ တွေ့ရပာတယ်။ ဦးစိန်မောင်ဦး ဆောင်းပားမှာ လောနိုင်ငံမှ ရောက်လာတဲ့ လူမျောက်ကို ဦးရွှေမောင်လို့ လက်ခံပာတယ်။ သူ့သမီး မယ်ဖုံးအထိ ဟုတ်နေပေမယ့် မယ်ဖုံးကနေမွေးလာတဲ့ လူမျောက်ကလေးကိုလည်း ကိုရွှေမောင်လို့ နာမည်ပေးထား ပြန်ပာတယ်။ ပြီးတော့ မောင်ရွှေမောင်နောက်မှာ ရွှေမိနဲ့ ရွှေမြ ဆိုပြီး သမီးနှစ်ယောက် ထပ်ရသေးတယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ ရွှေမိဟာ မောင်ရွှေမောင်လိုပဲ အမွေးတွေနဲ့ ဖြစ်ပာသတဲ့။ ဒာကြောင့် မင်းတုန်းမင်းက သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို မလွန်ဈေးရဲ့ ဈေးကောက်အဖြစ် စားစေတယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ ဟင်နရီယူး(လ်)ရဲ့ မှတ်တမ်းအရဆိုရင် သူနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ မဖုံးမှာ သားယောက်ျားလေး နှစ်ယောက် ရှိနေပာပြီ။ သားအကြီးဟာ ဘာမှ မထူးခြားပေမယ့် သားအငယ်ကတော့ မဖုံးလိုပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ အခြားသော မှတ်တမ်း အစောင်စောင်မှာ မဖုံးသား မောင်ဖိုးဆက်(ဆယ်) လို့ တွေ့ရပေမယ့် ဦးစိန်မောင်ဦးက ကိုရွှေမောင်လို့ ရေးထားတာကတော့ ထူးဆန်းနေပာတယ်။ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး စာဆိုတှောဝတဿထု ရေးသားရာမှာလည်း အမှတ်မှားပြီး ကိုရွှေမောင်လို့ ရေးမိတယ် ထင်မိပာတယ်။ ဦးရွှေမောင်ဟာ ဟင်နရီယူး(လ်)တို့ မလာခင် နှစ်များစွာကပဲ ဓားပြတွေ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးပာပြီ။ သူပြောတဲ့ သမီးနှစ်ယောက် ဆိုတာကလည်း ဟင်နရီယူး(လ်) မှတ်တမ်းနဲ့ဆို မကိုက်ညီပြန်ပာဘူး။
မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)ရဲ့ လူမျောက်ရှင်းတမ်းကတော့ သူရိယ ရုပ်စုံသတင်းက အကြောင်းအရာကို ပြန်ပြီး ဖှောပြထားတာပာ။ သူ့ဇာတ်လမ်းက ပုံပြင်လို ဖြစ်နေပေမယ့် နာမည်တွေကတော့ အခြားသော မှတ်တမ်း အစောင်စောင်နဲ့ အတှောလေး ကိုက်ညီတာကို တွေ့ရပာတယ်။ ဒာပေမယ့် သူ့ဆီမှာတော့ လူမျောက်အစဟာ ဦးရွှေမောင် မဟုတ်ဘဲ ဦးဘိုးမောင်လို့ ဆိုပာတယ်။ ဦးဖိုးမောင်ရဲ့ ပထမ မိန်းမနာမည်က မမိန်းခလေး ဖြစ်ပာသတဲ့။ ဦးဘိုးမောင် မျောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခာ စကား မပြောတတ်တော့ဘူး ဆိုတာကတော့ ကရောဖို့(ဒ်)ရဲ့ ကိုယ်တွေ့နဲ့ လွဲပာတယ်။ မမိန်းခလေးဟာ ဦးဘိုးမောင် မျောက်ဖြစ်သွားပြီး ပျောက်သွားတာကြောင့် သားနှစ်ယောက်ကို ခှောပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ ပြန်ရှာလို့ မရတော့ပာဘူးတဲ့။ ဒာနဲ့ ဘုရင်က ဦးဘိုးမောင်ကို ယူဝံ့တဲ့သူကို ဆုလာဘ်ထုတ်ပြီး ရှာဖွေတဲ့အခာ မှန်နန်းအပျိုတှောထဲက ငားရွာစား မမကြီး ဆိုသူက လက်ခံတာကြောင့် ပေးစားပာသတဲ့။ သူတို့ကနေ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် မွေးဖွားပာသတဲ့။ သမီးဖြစ်သူ မပုံဟာ ဦးဘိုးမောင်လို အမွေးတွေနဲ့လို့ ဆိုပာတယ်။ မပုံ အရွယ်ရောက်တော့ ဘုရင်က သူ့အဖေတုန်းကလိုပဲ ဆုလာဘ်ထုတ်ပြီး မပုံကို ယူမယ့်သူကို ရှာစေတဲ့အခာ လူပျိုတှော မောင်မောင်လေး ဆိုသူက လက်ခံလို့ မပုံနဲ့ ပေးစားပာတယ်။ မပုံကနေ ပထမသား ကိုကြယ်၊ ဒုတိယသား ကိုဆယ်၊ တတိယသမီး မယ်မိ (သူရိယရုပ်စုံသတင်းမှာ ပြထားတဲ့ ရုပ်ပုံမှာတော့ လူမျောက်မပုံနှင့် သမီးအထွေး လူမျောက်မလေး မယ်အိတို့ပုံလို့ ပာပာတယ်၊ စာမှားရိုက်သလား မသိပာ) တို့ကို ဖွားမြင်ပာသတဲ့။ ကိုဆယ်နဲ့ မယ်မိတို့ဟာလည်း မပုံလိုပဲ အမွေးတွေ ဖုံးလွှမ်း နေပာသတဲ့။ နောက်တော့ မယ်မိဟာ ဣနဿဒာဒေဝ စောင်းဆရာကြီးရဲ့ညီ မောင်ဘိုးထူးနဲ့ သင့်မြတ်ပြီး လူမျောက်မလေး တစ်ယောက် မွေးဖွားပာသတဲ့။ ဒာပေမယ့် မီးတွင်းထဲမှာပဲ မယ်မိ ကွယ်လွန်တယ် ဆိုပာတယ်။ မွေးလာတဲ့ လူမျောက်မလေးလည်း ၃လ အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ပာသတဲ့။ မပုံနဲ့ ကိုဆယ်တို့ကတော့ သီပောမင်းလက်ထက် တိုင်အောင် ဈေးကောက် ကောက်စား လာလိုက်တာ သီပောမင်း ပာတှောမူတဲ့အထိ ဖြစ်တယ်လို့ ဖှောပြထားပာတယ်။
Jan Bondeson ရေးတဲ့ The two-headed boy, and other medical marvels ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာတော့ ဘယ်စာအုပ်မှာမှ မပာသေးတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက် တစ်ခုကို တွေ့ရပာတယ်။ သူတို့ ပြင်သစ်မှာ ရှိနေခိုက် ဿပြင်သစ်နိုင်ငံသား Anthropologist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ M. Guyot-Daubes က သူတို့ရဲ့ တာဝန်ခံ Farini ကို လာတွေ့ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ပာတယ်။ အဲဒီမှာ မဖုံးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုရွှေမောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိရပာတယ်။ တကယ်တော့ ကိုရွှေမောင်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဆွေကြီးမျိုးကြီးထဲက ဖြစ်ပာတယ်တဲ့။ မိဖုရားအပား ခစားရသူ အဆင့်မြင့် နန်းတွင်းသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပာသတဲ့။ ဘာသာရေးအဆုံးအမ တစ်ခုနဲ့ မကိုက်ညီတာကို ပြုမိတဲ့ အပြစ်ကြောင့် ဘုရင်က တံကျင်လျှိုသတ်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်ပြီးခာမှ တလုတ်ကုန်းမှာ ကိုရွှေမောင်ကို လက်ထပ်မယ်ဆိုရင် အသက်ချမ်းသာပေးမယ် ဆိုတာကြောင့် လက်ထပ်ခဲ့ရတာလို့ ဆိုပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ဒာဟာ ဖာရီနီက သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပိုပြီး ထင်ရှားစေချင်လို့ ပိုပိုသာသာ ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက် တွေ့ရပာတယ်။ ကိုရွှေမောင်ရဲ့ မိန်းမဟာ ချောမောလှပတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ကရောဖို့(ဒ်)ရဲ့ မှတ်တမ်းမှာ တွေ့ရပာတယ်။
မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မမိဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ ဘွန်ဒီဆန်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဆိုထားတယ်။ မမိ ဆိုတာကို မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ ညီမမဟုတ်ဘဲ သမီးဖြစ်သူလို့ ဖှောပြခဲ့တယ်။ ဒာပေမယ့် ၁၈၇၁ ခုနှစ်ထုတ် အိနဿဒိယနေ့စဉ်သတင်းစာ မှာတော့ အသက် ၄၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီး၊ အသက်၂၀ အရွယ် ယောက်ျား၊ ၁၁ နှစ် သမီးတစ်ယောက် လို့ ပာရှိခဲ့တာမို့ မမယ်ဟာ မောင်ဖိုးဆက်အောက် ကိုးနှစ်ငယ်တဲ့ ညီမလို့ ယူဆရပာတယ်။ Buchanan's Journal of Man, February 1887 Volume 1, Number 1 ထဲမှာလည်း မောင်ဖိုးဆက်မှာ သားသမီး မရှိဘူးလို့ ဆိုထားတာမို့ မမိဟာ မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ ညီမ ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ ထင်မိပာတယ်။ အောက်က ဓာတ်ပုံအရ ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးငယ်ဟာ မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ သမီး ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပာဘူး။
ပုံ(၇) From Martin Monestier's Human Oddities.
ဒီပုံဟာ Martin Monestier ရဲ့ Human Oddities ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ပာတဲ့ပုံပာ။ ဒီပုံမှာ မဖုံးထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံဟာ တခြားပုံတွေမှာ ထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံနဲ့ မတူပာဘူး။ ပြီးတော့ ပုံထဲက သားဖြစ်သူ မောင်ဖိုးဆက်ဟာလည်း တှောတှောငယ်သေးတာကို တွေ့ရပာတယ်။ တချို့ကတော့ အလယ်မှာ ရပ်နေတဲ့ လူဟာ မဖုံးရဲ့ ယောက်ျား မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ အဖေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆကြပာတယ်။
ပုံ(၈) Maphoon, Moung-Phoset and Mah-Me. The original Goss photograph from which the La Nature (1875) illustration was engraved
ပုံ(၈) ကတော့ ၁၈၇၅ မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ဖြစ်ပာတယ်။ ၁၈၈၆ ဇွန်လထဲမှာ မမိ ဆုံးတယ်။ နိုင်ငံခြား သွားခာနီး မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ ဆုံးတယ်လို့ သိရပာတယ်။ ဒီပုံဟာ မမိမကွယ်လွန်မီ ရိုက်ကူးတဲ့ပုံ ဖြစ်တာမို့ အသက်ရှင်လျက်သား လူထူးဆန်း မိသားစု သုံးယောက်ကို တစ်စုတဝေးထဲ တွေ့ရတာမို့ ထူးခြားတဲ့ပုံလို့ သတ်မှတ်ရပာမယ်။
ပုံ(၉) မဖုံးတို့ မိသားစု နိုင်ငံခြား မသွားမီပုံ
အထက်က ပုံ(၉) ဟာလည်း ထူးခြားပာတယ်။ ဒီပုံအလယ်မှာ ရပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)က ဂျွန်ကရောဖို့(ဒ်)နှင့် ကိုရွှေမောင် မယ်ဖုံတို့ မိသားစုလို့ နာမည် တပ်ထားပာတယ်။ ပုံ(၁၀)နဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခာ ရပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဟာ သူတို့ကို နိုင်ငံခြား ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အီတလီအရာရှိ Captain Paperno များ ဖြစ်မလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒာပေမယ့် ရုပ်သွင်က အီတလီထက် အဂဿငလိပ်လူမျိုးနဲ့ ပိုတူနေပာတယ်။ ဒာမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကပဿပတိန် Farini များလားလို့ ထင်မိပာတယ်။ ဒီပုံမှာပာတဲ့ ယာဘက် အစွန်ဆုံးက အမျိုးသမီးဟာ မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ မိန်းမ နန်းတွင်းအပျိုတှော ဖြစ်ပာတယ်။ အောက်က ထိုင်နေတဲ့သူကတော့ မဖုံး မျက်စိမကောင်းတော့လို့ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုစုဖို့ ခှောထားတဲ့သူ ဖြစ်ပာတယ်။ ဂျွန်ကရောဖို့(ဒ်)ဟာ May 11, 1868 မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာမို့ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မဖုံးအသက် ၄၆နှစ်၊ မောင်ဖိုးဆက်အသက် ၁၅နှစ်လောက်သာ ရှိနေဦးမှာပာ။ ၁၅နှစ်မှာ မောင်ဖိုးဆက် အိမ်ထောင် မကျလောက်သေးပာဘူး။
ပုံ(၁၀) မောင်ဖိုးဆက်မိန်းမ၊ မောင်ဖိုးဆက်၊ မဖုံး၊ မဖုံး၏ အကူလူ Charles Eisenmann cabinet card, 1887 (Mitchell).
ပုံ(၉) က မြန်မာပြည်က မထွက်ခွာခင် ရိုက်ထားတာလို့ ယူဆချင်စရာ ဖြစ်ပြီး ပုံ(၁၀) ကတော့ နိုင်ငံခြားရောက်မှ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ဖြစ်ပာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ပုံဟာ ၁၈၈၇ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ အဝတ်အစား၊ လက်ဝတ်တန်ဆာ စတာတွေကို ပထမပုံမှာ မတွေ့ရလို့ပာပဲ။ နောက်ပြီး မောင်မျိုးဆက်ရဲ့ မိန်းမရော၊ မဖုံးရဲ့ အကူကောင်လေးရော ပုံ(၁ဝ)လောက် မဝသေးတာကို တွေ့ရပာတယ်။
လူထုဒှောအမာရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ လူမျောက် မောင်နှမကို မလွန်မင်းသားကြီးက မလွန်ဈေးကြီးရဲ့ ဈေးကောက် ခန့်အပ်တယ်လို့ ပာဝင်ပာတယ်။ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)ရဲ့ လူမျောက်ရှင်းတမ်းမှာလည်း မဖုံးမှာ ကိုကြယ်၊ ကိုဆယ်၊ မမိ ဆိုပြီး သားသမီး သုံးယောက် ရှိတယ်လို့ သူရိယရုပ်စုံမဂဿဂဇင်းက ဆိုထားတဲ့အကြောင်း ပာတဲ့အတွက် အထက်က အချက်အလက်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် မောင်ဖိုးဆက် ဒာမှမဟုတ် မောင်ဖိုးဆယ် နဲ့ မမိ ဟာ မောင်နှမသာ ဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်နေပာပြီ။
၁၈၆၈ ခုနှစ်မှာ Captain Houghton ဆိုသူက မဖုံးတို့ မိသားစုရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လန်ဒန်မှာ ပြသခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မဖုံးအသက် ၄၄နှစ်၊ သားအကြီးက ၁၈နှစ်၊ သားအငယ်က ၁၄နှစ် အသီးသီး ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပာတယ်။ ပြီးတော့ သူကနေ ဒောက်တာ ဟာမန်ဘီဂယ်ကို ပေးပို့ပြီး သိပဿပံစာစောင်တွေမှာ ဖှောပြခဲ့ပာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အခြား ဓာတ်ပုံ တှောတှောများများကို ရိုက်ကူးခဲ့ကြသူတွေက L.Allen.Goss၊ Le Double AF၊ Hossay စတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပာတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ အခုချိန်ထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့က Musee de l'Homme ပြတိုက်၊ British Museum (Natural History)၊ Royal Anthropological Institute in London စတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိနေပာသေးတယ်။
အမေရိကန် ဝာရှင်တန်ဒီစီ သခဿငျိုင်းမှာ မဖုံးကို သဂြဿငိုဟ်ခဲ့တာမို့ သူတို့ဆီက မှတ်တမ်းတွေကို ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ရင် ကွင်းဆက် ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ မောင်ဖိုးဆက်တို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း သိကောင်း သိလာနိုင်စရာ ရှိပာတယ်။
ဟင်နရီနယူး(လ်) ထောက်ပြခဲ့တဲ့ ကရောဖို့ဒ် မှားပြီးရေးဆွဲခဲ့သော ဦးရွှေမောင်နဲ့ သမီးမဖုံးပုံ
မဖုံး၊ မောင်ဖိုးဆက်နဲ့ မမိတို့ကို တွေ့ရစဉ် (မမိမကွယ်လွန်ခင်လေးက ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ဖြစ်မယ်)
မဖုံးနဲ့ မောင်ဖိုးဆက် (မဖုံးအသက်တှောတှော ကြီးနေပြီ)
မဖုံးငယ်ငယ်၊ မောင်ဖိုးဆက် အသက် ၂ဝလောက်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ရတယ်။ မမိမှာ အတှောငယ်သေးတာ တွေ့ရပာမယ်။
မဖုံးရဲ့ အမွေးပောက်ပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားပုံ
၁၈၁၈ အိမ်ထောင်ကျ အသက် ၂၂
၁၈၁၉-၁၈၂၆ ကလေး လေးယောက်မွေး ပထမ ၂ယောက်သေ
၁၈၂၁ မှာ တတိယ သမီးမွေး
၁၈၂၄ မှာ သူ့ဗီဇ အပြည့်ပာတဲ့ သမီး မဖုံးကိုမွေး
၁၈၂၆ ကရောဖို့နဲ့တွေ့ အသက် ၃၀
၁၈၅၅ မတိုင်ခင်မှာ ကိုရွှေမောင် ကွယ်လွန်
၁၈၂၄ မှာ မွေး
၁၈၅၅ စက်တင်ဘာ ၁၈ မှာ Henry Yule တို့နဲ့တွေ့
၁၈၅၄ မှာ သူ့ဗီဇ အပြည့်ပာတဲ့ သား မောင်ဖိုးဆက်ကို မွေး
၁၈၆၃ မှာ သူ့ဗီဇ အပြည့်ပာတဲ့ သမီး မမိကို မွေးတယ်လို့ ခန့်မှန်းရ
၁၈၈၆ ဇွန်လ သမီး မမိ ကွယ်လွန်
၁၈၈၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ အဂဿငလန်ကို သွား
၁၈၈၈ ဖေဖှောဝာရီလ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝာရှင်တန်ဒီစီမှာ ကွယ်လွန်
၁၈၅၄ မှာ မွေးဖွား
၁၈၈၅ မှာ မနဿတလေးကနေ တောထဲကို ထွက်ပြေး
၁၈၈၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ အမေ၊ မိန်းမ၊ အကူတစ်ယောက်နဲ့အတူ အဂဿငလန်ကို ထွက်ခွာ
၁၈၈၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်အထိ Barnum လန်ဒန်မြို့ ပီကာဒလီလမ်းပှောက Egyptian Hall မှာ ဖျှောဖြေ
၁၈၈၇ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့က Folies Bergere မှာ ဖျှောဖြေ
၁၈၈၇ နောက်ပိုင်း Barnum အဖွဲ့နဲ့ အမေရိကန်တစ်ခွင် လှည့်လည်ပြသတယ်လို့ ခန့်မှန်းရ
ရတနာပုံမနဿတလေး မနဿတလေး ကျွန်မတို့မနဿတလေး၊ လူထုဒှောအမာ
နန်းမူနန်းရာ မြကေတု စာပောင်းချုပ်၊ မြကေတု
ထီးအငွေ့နန်းအငွေ့၊ မောင်သန်းဆွေ (ထားဝယ်)
Journal of an embassy from the governor general of India to the court of Ava by John Crawfurd
A narrative of the mission sent by the governor-general of India to the court of Ava in 1855, with notices of the country, government, and people (1858)
The Human Hair: It’s Structure, Growth, Diseases, And Their Treatment (1869)
The Two-Headed Boy, And Other Medical Marvels By Jan Bondeson
Journal of the Royal Society of Medicine, Volume 89, July 1996, pp. 403-408
Transactions of the Ethnological Society of London, Vol.7(1869), pp. 53-59
Transactions / World's Columbian Dental Congress, Volume 1 (1894), pp. 260-261
Download this article [ Pdf | 800k ]
Posted by NLS at 4/19/2010 09:45:00 AM 32 comments Links to this post
Labels: History, Interesting, Knowledge, Selection
ဗုံးပောက်ကွဲမှုကြောင့် သကြဿငန်မဏဿဍပ်တွေ ပိတ်မယ်တို့ ဘာတို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း အတက်နေ့မှာတော့ သကြဿငန်ပွဲတှောကို ဆက်လက် ဆင်နွှဲကြပြန်ပာတယ်။ ဒာပေမယ့် မဏဿဍာပ် ထိုင်တဲ့သူနဲ့ လည်ပတ်သူတွေ သိသိသာသာကြီးကို လျော့နည်းသွားတာ တွေ့ရပာတယ်။ အရင်နေ့တွေက ကန်တှောကြီး ပတ်လမ်း တစ်လျှောက် လူတွေ တိုးမပောက်အောင် စည်ကားခဲ့ပေမယ့် အတက်နေ့မှာတော့ အတှောကြီး ရှင်းလင်းလို့ နေပာတယ်။ ထူးခြားတာက ဗုံးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ X2O မဏဿဍပ် ပြန်ဖွင့်တာပာပဲ။ လူတွေအားလုံး အတှောကြီးကို အံ့အားသင့်နေကြပာတယ်။ သူ့ဘေးနားက မဏဿဍပ်ကတော့ လုံးဝကို ပိတ်သွားပာတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ်လို့ ဆိုတာ မသိရပာဘူး။ ဒီနေရာမှာ အမြင်နှစ်မျိုး တွေ့ရပာတယ်။ တချို့က ဒီလို ဗုံးပောက်ကွဲမှု ဖြစ်ထားတဲ့ မဏဿဍပ် အနေနဲ့ အဲဒီနေ့မှာ ပြန်မဖွင့်သင့်ဘူးလို့ ဆိုတဲ့သူတွေရယ်၊ ပြန်ဖွင့်တာ မှန်တယ် ဆိုတဲ့ သူတွေရယ်။ ဒီလို ပြန်ဖွင့်တာဟာ ပရှောဖက်ရှင်နယ် ဆန်တာလို့ မှတ်ချက်ပြုသူတွေကလည်း ပြုပာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဏဿဍပ် တစ်ခု အနေနဲ့ ရေပက်သူတွေ ဆီကနေ ပိုက်ဆံတွေ ယူထားတာ ရှိတယ်၊ ပြီးရင် Sponsor တွေနဲ့ စကားပြောစရာ အများကြီး ဖြစ်လာမယ်။ ဒာကြောင့် ပြန်ဖွင့်တာလို့ သုံးသပ်ကြပာတယ်။ X2O မှာ အရင်နေ့တွေကလောက် လူမများတော့ပေမယ့် အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ရှိတာကို တွေ့ရပာတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မဏဿဍာပ်တိုင်း လိုလိုရဲ့ ရှေ့မှာ လုံခြုံရေးရဲတွေ စွမ်းအားရှင်တွေ အများအပြား ချထားပာတယ်။ သူတို့က မဏဿဍာပ်ရဲ့ လမ်းတစ်ဖက်ခြား ကန်တှောကြီးဘက်မှာ နေရာယူ ထားကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ မနေ့က ကျွန်တှောရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်မှာ Comment ပေးကြသူတွေရဲ့ တချို့သော မရှင်းလင်းတဲ့ အချက်တွေကို ကျွန်တှော မျက်မြင် တွေ့ရသလောက် ပြောပြချင်သေးတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ "ရဲတွေ ရောက်လာတာ မြန်တယ်"လို့ ရေးထားပါတယ်။ တကယ် မြန်ပါသလား?? တကယ် မြန်တယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော် သံသယ ရှိဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလောက် လူတွေ၊ ကားတွေ ပိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်ရဲကမှ အဆင်သင့် မစောင့်နေရင် ဒီလောက် မြန်မြန် ရောက်မယ် ထင်ပါသလား??
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ အဲဒီနေရာတဝိုက် လူပောင်း သိန်းနဲ့ချီ ရှိနေတာပာ။ လမ်းတွေမှာ ကားတွေရော လူတွေရော အပြည့်အကျပ်ပာပဲ။ အဲဒီနေ့က လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ လုံခြုံရေးရဲတွေ အသင့် ရှိနေပာတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာက ဒီဘက်တကြောမှာ နောက်ဆုံး မဏဿဍပ်လည်း ဖြစ်ပာတယ်။ ဒာကြောင့်မို့ ဗုံးကွဲတဲ့အခာ ရဲတွေ ချက်ခြင်း ဆိုသလို ရောက်လာနိုင်တာပာ။ မီးသတ်ကားနဲ့ ရဲကားတွေကတော့ ကန်ပတ်လမ်းအတိုင်း လာပာတယ်။ သူတို့ လာတဲ့အချိန် ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေပိတ်နေလို့ တချို့ကားတွေကို လူအုပ်ကြီးက မပြီး ရွှေ့ပေးကြပာတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့လာတာ မြန်တာပာ။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူတွေ ရှိသလို ဆိုးတဲ့လူလည်း ရှိတာပာပဲ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်တှောတို့ မြင်လိုက်ရတဲ့ ရဲတွေ၊ ကြက်ခြေနီတွေနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေကတော့ တကယ်ကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြတာကို မြင်ရတာမို့ ချီးကျူးပာတယ်။ ဒာကို လက်မခံနိုင်ရင်လည်း မတတ်နိုင်ပာ။ တချို့သောသူများ ကွန်မန့်ရေးကြတာက ဒီလို မြန်မြန်လာနိုင်တာ ကြိုတင်သိနေလို့ ဆိုပြီး ပြောကြပြန်တယ်။ သူတို့ဘာသာ ကောင်းတာ မကောင်းတာက တစ်ပိုင်း။ မြန်မြန်လာရင် မြန်မြန်လာလို့၊ နောက်ကျရင် နောက်ကျလို့ဆိုပြီး နေရာတကာ လိုက်အပြစ်တင်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဓာတ်ပုံတစ်ခုမှာ ကျွန်တှောက ရဲတွေလာတော့ လူတွေက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြသည်လို့ ရေးလိုက်ပာတယ်။ ဒီဟာလေးကို အလွန်တရာမှ ရွှေဉာဏ်တှော စူးရောက်တှောမူတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တှောလှန်ရေး သမားကြီး တစ်ယောက်လို့ ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်က ရေရေရာရာ မသိဘဲနဲ့ အခုလို ရိပာတယ်ခင်ဗျ။
ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ကြည့်ရင်း ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ဆိုသလို ပုံစာတခုကြောင့် အံ့သြပြီး ပြုံးမိတယ်..။ ပြည်သူ့ရဲတွေ တဲ့။ ရဲတွေရောက်လာတော့ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုကြတယ်.. တဲ့။ အရေးထဲ ဒီကလေးနှယ် .. ရိနေသေးတယ်လို့ တွေးမိတာ..။ နောက်တော့ သေချာ အဆုံးထိကြည့်တော့ သူက အတည် ရေးတာနဲ့ တူတယ်ဗျ..။ ဒီတော့မှ “သြော်… တခုခုကြောင့် အချုပ်ကျရင် အချုပ်ထဲမှာ အချုပ်သားကိုရော.. သူမိသားစု တွေကိုပါ အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့..၊ ပြီးတော့ အင်းလျားလမ်းက သနားစရာကောင်းလှတဲ့ ၅လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမျိုးလို ပြည်သူတွေ မတရားသဖြင့် အမှုဆင်ခံနေရတာတွေကို မကာကွယ်နိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရဲတွေကို ပြည်သူ့ရဲ.. ခေါ်ထိုက်သလား..” လို့ တွေးမိပြီး စိတ်ထဲ နင်တင်တင်..။ ပြီးတော့ အဲဒီရဲတွေ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ဓာတ်ပုံထဲ သေချာမမြင်ရပေမဲ့ မြင်ဖူးချင်လို့ လိုက်ကြည့်မိသေးတယ်။ ဘာလို့ဆို စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်လူထုလှုပ်ရှားမှုတုန်းက လူထုကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ရိုက်လားနှက်လားလုပ်ပြခဲ့တာ သူတို့လည်း အပါအ၀င်..။ ဒါကိုတောင်မှ ဘယ်လိုလူတွေကများ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုသလဲပေါ့..။ လူတွေက သူတို့ဘာသာ အခင်းဖြစ်နေရာကို ၀ိုင်းကြည့်နေတာ မဟုတ်ဘူး လားပေါ့။ သောင်းသောင်းဖြဖြ လို့ သုံးရင် လက်ခုတ်လက်ဝါးတီး အားပေးတာမျိုး.. အဲဒီလူတွေ ကို သိသိသာသာ ကြိုဆိုတဲ့ အမူအယာတွေနဲ့ ဟစ်အော်အားပေးတာမျိုးတွေ ရှိလို့ ဖြစ်မှာပဲ ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို လိုက်ကြည့်တော့လည်း အဲလိုမျိုးတော့ မတွေ့မိပြန်..။ ခက်တော့ နေပါပြီ… မင်္ဂလာအခါရက်ကြီး.. မနက်စောစောစီးစီး.. ကျမတယောက်တည်း အတွေးတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာ။
သူ့ကို ကျွန်တှော လူကိုယ်တိုင် မသိပာ။ ဒာပေမယ့် သူက ကျွန်တှော့ အမများရဲ့ ဆရာမ ဖြစ်ဖူးတာကြောင့် ကြားဖူးနေပာတယ်။ တကဿကသိုလ်မှာ ဆရာမ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်က ဒီလောက်ထိ လိုရာဆွဲ ကောက်ချက်ချတဲ့ နေရာမှာ တှောလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ဖူးတာ အမှန်ပာ။ ဒီသတင်းကို ပုံတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ရေးနိုင်အောင်လို့ ကျွန်တှော ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို သူသိမယ် မထင်ပာ။ ကျွန်တှော Blogging ကို ဘယ်လို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နေခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း သူ သိပုံမရပာ။ ကျွန်တှော့ရေးသမျှစာ တင်သမျှ ပိုစ့်တိုင်းဟာ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုနဲ့ လုပ်ခဲ့တာချည်းပာ။ သူများဟာတွေ ယူယူတင်နေတဲ့ Blogging မဟုတ်ပာဘူး။ ဒီကိစဿစဟာ Citizen Journalism ရဲ့ အခန်းကဏဿဍကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့ ကိစဿစ ဖြစ်တာမို့ ကျွန်တှော အထူးပဲ ကြိုးစားခဲ့ပာတယ်။ ကမဿဘာတစ်ဝှန်းလုံးက သတင်းတွေနဲ့အပြိုင် အမြန်ဆုံး တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်မီဒီယာမှ မရှိသေးတဲ့ပုံတွေကို ကျွန်တှော ပထမဆုံး တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလို အရေးပာတဲ့ အရာတွေကိုကျတော့ မမြင်ဘဲနဲ့ ဓာတ်ပုံ Caption စာသားလေး တစ်ခုကို အကျအန ကောက်ယူပြီး အမျိုးမျိုးသော အနက်တွေဖွင့် ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးတွေ ထပ်တလဲလဲ ပြန်ဖွင့်ပြီး ကျွန်တှော့ကို ကောက်ချက် ချတာကတော့ အလွန်တရာ ရယ်ချင်စရာ စိတ်ပျက်ဖွယ် အကွက်ကြီးပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ ဘယ်လို သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုသလဲ သိချင်ရင် အဲဒီနေ့က အဲဒီနား တဝိုက်မှာ ရှိကြတဲ့ ရေကစားနေတဲ့ လူတွေထဲက ကြိုက်တဲ့ တစ်ယောက်ကိုသာ မေးကြည့်ပာလို့ ညွှန်းချင်ပာတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီလို လူတွေသေပြီး အားလုံးဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲပြီး ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဆဲဆိုနေကြတာ တွေ့ရလို့ ကျွန်တှော အထူးပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပာတယ်။ ဒီလို ပြသဿသနာတွေရဲ့ အဖြေကို ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီး ကူညီကြရမယ့်အစား အမေ နှမ အများသူငာ မြင်လို့မကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဆဲဆို ကြပာတယ်။ နောက်ဆုံး ပိုစ့်ရေးမိတဲ့ ကျွန်တှော့ကိုတောင် စွပ်စွဲချင်တဲ့ သဘောမျိုးတွေ တွေ့လာရတယ်။ ဒီပိုစ့်ရေးတာ Pro Government တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရေးတယ်ဆိုပြီး စွဲချက်တင်ပာတယ်။ တချို့ကလည်း ဗုံးကွဲတယ် ဆိုတာကို လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေ ဆီကနေ အတည်ပြုချက် ယူလို့ ဝေဖန်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပာတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဓာတ်ပုံကို အေးအေးဆေးဆေး ရိုက်နိုင်တာ ဘယ်လိုလူ ဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီး ဘလိုင်းကြီး ခွပ်တဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း ပာတယ်။ ကျွန်တှောက အစိုးရအတွက် လုပ်နေတဲ့ကောင် ဆိုပြီး စွပ်စွဲချက်တွေလည်း ပာလာတယ်။ သူ့အဖေက စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဒီကောင့်ကို သတိထား ဆိုပြီး တိုက်ပေးတဲ့ဟာတွေလည်း ပာလာတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ ပေးကြတဲ့ မှတ်ချက် မှန်သမျှကို ကျွန်တှော တစ်ခုမှ မဖျက်ခဲ့ဘူး။ ဒီလို ပုတ်ခတ် ဝေဖန်တာ မျိုးတွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည် အတှောရှိနေပာပြီ။ ဒာပေမယ့် ကျွန်တှော့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ပုဂဿဂိုလ်ရေးတွေကိုပာ စှောကားရုံသာမက ကျွန်တှော လုပ်နေတဲ့ အလုပ် မှန်သမျှကိုပာ ပုတ်ခတ်တာကတော့ လွန်လာပာပြီ။ နာမည်ဝှက် အမျိုးမျိုးတပ်၊ Anonymous သုံးပြီး ရေးလို့ရေးနဲ့ ကျွန်တှော့အကြောင်း၊ ကျွန်တှောလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေအကြောင်း၊ ကျွန်တှော လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ အလုပ်တွေအကြောင်း၊ ကျွန်တှော့ ခံယူချက် အကြောင်း ဘာမှ သေသေချာချာ မသိဘဲနဲ့ လျှောက်ပြီး ဝေဖန် ပုတ်ခတ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အမျိုးသားချင်း မြန်မာလူမျိုးတွေကို တကယ် စိတ်ပျက်လာတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့တွေကတော့ ကိုယ်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး သိတဲ့သူတွေဆိုတာ သိပာတယ်။ တိုက်ခိုက်တာတောင် သူရဲဘော ခပ်ကြောင်ကြောင် ကိုယ့်နာမည် အရင်းတောင် ကိုယ်မဖှောရဲဘဲ တိုက်တတ်တဲ့ သူတွေကို မိတ်ဆွေအဖြစ် ဆက်ရှိနေဖို့ မလိုအပ်ဘူး။
ဒီဟာကို လုပ်တာဟာ အစိုးရကိုယ်တိုင်လို့ ပြောကြသလို၊ NCUM အဖွဲ့ကဆိုပြီးလည်း စွပ်စွဲကြပြန်ပာတယ်။ ABSDF ကိုလည်း စွပ်စွဲထားတာ တွေ့ရပာတယ်။ တစ်ယောက်ကလည်း ဒီလိုဗုံးခွဲတာကို ထောက်ခံတယ် ဒာမျိုး လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး ပွဲဆူအောင် လုပ်ပာတယ်။ တချို့ကတော့ နာမည်အမျိုးမျိုးသုံးပြီး အကြောင်းအရာ တစ်ခုထဲကို Spam လုပ်ပာတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင် ခွဲတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေက မနည်းပာဘူး။ အဲဒီလို ထင်တာကို မခံနိုင်လို့ ပြန်လှန်စွပ်စွဲသူတွေလည်း မနည်းပာဘူး။ ဒီလို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် မှတ်ချက်တွေ ရေးနေကြရင်းက အမေ၊ နှမ တွေပာ ကိုင်တုတ်ပြီး ခားအောက်ပိုင်း စကားလုံးတွေချည်း ဖြစ်လာပာတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သေဆုံးကြသူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ အကူအညီပေးရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စတာတွေကို ရေးသင့်တဲ့ နေရာမှာ အမြင်မတူသူတွေရဲ့ ဆဲဆိုရာ စကားလုံး စစ်တလင်း ဖြစ်လာပာတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်သမျှ နိုင်ငံရေး မကင်းတဲ့ အခုလို အမှုအခင်းတိုင်း လုပ်တဲ့သူကလည်း ဘယ်သူလုပ်တယ် ဆိုတာကို ဗြောင်မကြေငြာရဲသလို အချို့သော အမှုတွေကလည်း တရားခံ မဖှောထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စွပ်စွဲတတ်လာကြတာ တွေ့ရပာတယ်။ စွပ်စွဲတာသာ ရှိပြီး လက်တွေ့မှာတော့ လုပ်ကြတဲ့သူ သိပ်မရှိပာဘူး။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Ethic မရှိတဲ့ အွန်လိုင်းက တချို့သော လူတွေနဲ့ တချို့သော Blogger အမည်ခံ လူတွေပာ။ ဘလော့မှာရေးတဲ့စာ တင်တဲ့ပုံတိုင်း ခွင့်ပြုချက် မရယူဘဲ ယူသုံးခွင့် မရှိပာဘူး။ ခွင့်ပြုရင်လည်း ဘယ်သူ့ဟာ ဘယ်လင့်က ဆိုတာမျိုး Credit သေသေချာချာ ပေးရပာမယ်။ ဒာကို သေသေချာချာ အထပ်ထပ် အခာခာ ပြောနေပေမယ့် ပှောတင်ကို မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး တခြားနေရာတွေမှာ တင်ကြပာတယ်။ အဲဒီအကြောင်း ဒီနေရာတွေမှာလည်း ရေးခဲ့ဖူးပာပြီ (Link1, Link2) ဒာဟာ ဖန်တီးသူကို စှောကားတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ ပိုဆိုးတာက တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး တင်တဲ့အတွက် Search Engine တွေမှာ Duplicate Result တွေပြပြီး ပြသဿသနာ ဖြစ်လာပာတယ်။ မူရင်းရေးသူက ဟိုးနောက်ဆုံးမှာ ရောက်နေပြီး သူများဟာ ယူတင်တဲ့ သူတွေက ထိပ်ရောက်နေတာမျိုးပာ။ အဲဒီထက် ပိုဆိုးရွားတဲ့ လူတွေကတော့ သူများရေးတဲ့စာ၊ သူများရိုက်တဲ့ ပုံကို သောက်ရှက်မရှိ ကိုယ့်နာမည် ဖမ်းတပ်ပြီး မဏဿဍပ်တိုင်တက် ပဏာယူကြတဲ့ သူတွေပာ။ ဒီကိစဿစဟာ သူတို့အတွက်တော့ ဘာမှမထိခိုက်ပေမယ့် ကျွန်တှောတော့ တှောတှောလေး ရှင်းလိုက်ရတယ်။ ဟိုတစ်နေ့တုန်းက နာမည်တွေနဲ့တကွ၊ အထောက်အထား တွေနဲ့တကွ ပြောပစ်မယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တှော မြိုသိပ်လိုက်ပာတယ်။ စိတ်လည်း တှောတှော ပျက်သွားပာတယ်။ ကိုယ့်အားထုတ်မှု မပာဘဲ လုပ်စားတဲ့လူတွေကို အလွန် မုန်းတီးပာတယ်။
အဲဒီပိုစ့်ကို ကျွန်တှော တင်မိတာ မှားလား မှန်လား ဆိုတာတောင် အခုဆို ဝေခွဲရ ခက်နေမိပာတယ်။ Comment ပောင်း ၅၀၀ ကျှောအထိ ထူးထူးခြားခြား ရခဲ့ပေမယ့် လေးပုံသုံးပုံဟာ အထက်က ပြောခဲ့သလို ဆဲဆိုစာများသာ ဖြစ်နေပာတယ်။ ဒောသကြောင့် ဆဲဆိုအပြစ်တင်တာကို နားလည်နိုင်ပေမယ့် ဒာဟာ လက်တွေ့လုပ်ရပ် တစ်ခုအနေနဲ့ဆို ဘာအရာမှ မရောက်ဘူးလို့ မြင်ပာတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တှော့ဆီကို ရောက်လာတဲ့ မေးလ်တွေထဲက တချို့ကို ဖှောပြပေးပာမယ်။
အစ်ကို့ရဲ့ ဗုံးပေါက်တဲ့ သတင်းပို့စ်ကို မနေ့က တင်ကတည်းက ဖတ်ပြီးတာပါ။ ကျွန်တော်က မန့်တွေ ရေးလေ့မရှိပေမယ့် အခု အစ်ကို့ပို့စ်မှာ ရေးထားတဲ့ မန့်တွေ ကြည့်ပြီး ပြောချင်တာလေးရှိလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ မန့်ရေးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများက အစ်ကိုတင်ဖူးတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုထဲက ဆရာကျော်ဝင်း ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။ အစ်ကို ကျွန်တော်ပြောတာကို နားလည်မှာပါ။ သူတို့ ဟာ အင်တာနက်ကို ပုံမှန်သုံးနေသူတွေ၊ ဘလော့ဂါတွေ အများစု ဖြစ်မှာပါ။ အစ်ကိုပြောတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေထက်တော့ အသိပိုရှိကြမှာပါ။ သူတို့ တောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင် သာမန် ပြည်သူတွေဆို ဘယ်လိုနေမလဲ။ အစ်ကိုလည်း နာဂစ်တုန်းက သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ အသိ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုတွေကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ မြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်က ချစ်စရာကောင်းပေမယ့်တိုးတက်ဖို့ အများကြီး လိုသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို နိင်ငံခြားမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူလာတဲ့ သူတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ မြန်မာပြည် တိုးတက်ဖိုဆိုရင် အော်တိုခရေစီနဲ့ အုပ်ချုပ်၊ ငါးနှစ်အောက် ကလေးတွေပဲ ချန်ထားပြီး အကုန်သတ်၊ အဲဒီလို ရီဗော်လူးရှင်း လုပ်မှရမယ်တဲ့။ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် အသာထား။ ဘာဖြစ်လို့ ပြောသလဲ စဉ်းစားကြည့်သင့် ပါတယ်။ အခု မန့်တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ တို့လူမျိုးဟာ စိတ်ခံစားမှု နောက်ကို အတော်လိုက်တဲ့ လူမျိုး၊ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းတဲ့ လူမျိုးပါလား လို့ သွားတွေးမိတယ်။ အခုဆို ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ပိုတွေ့ လာရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လေးလေးနက်နက်တွေး၊ ရေးစေချင်တယ်။ ဒါလေးပြောချင်လို့ပါ။ မန့်ရေးတဲ့သူတွေရဲ့ စေတနာ၊ ကရုဏာကို မထီမဲ့မြင် ပြုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ခံစားမိတာပြောတာပါ။ တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်က အလုပ်မအားတော့ အစ်ကို့ရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ဒီနေ့ (ရှားရှားပါးပါး အခွင့်အရေးရတုန်း) တစ်နေကုန် တစ်ဝကြီး (၈ နာရီလောက်) ထိုင်ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။ နောက်များမှ ပြောချင်တာလေးတွေ မေးပို့ပါမည်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဒီလို မေးလ်ပို့လာပာတယ်။
အကိုတင်ပေးတဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဗုံးကွဲတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရ၊ မြင်ရတဲ့ အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ Comment တွေ တော်တော် များလာတယ်။ ရိုင်းပြတဲ့ စာသားတွေ၊ ဆဲဆိုမှုတွေလဲ အများကြီး ဖြစ်လာပြီ။ တချို့ဆိုရင် comment တမျိုးထဲကို အကြိမ်ကြိမ် တင်နေတယ်။ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲပြောနေကြတာပါပဲ။ ဖတ်ရတဲ့ သူအတွက်လဲ အမြင် မှားနိုင်ပါတယ်။ လူတွေ ဟိုထင်ဒီထင်နဲ့ ရှုပ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက နှစ်ကူးမှာ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ ဗုံးဖောက်တဲ့လူက မကြောက်ပေမဲ.့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေကြတဲ့ တခြားသူတွေကိုကော အကုသိုလ်တွေ ပေးတော့မှာလား။ အကို ကိုယ်တိုင်ကော ဒီလို ဆဲဆိုနေတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းသာပါသလား။ ကျွန်တော့် အမြင်တော့ အကို တခုခုတော့ လုပ်သင့်တယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ နှစ်ကူးမှာ သူများ မကောင်းရင်တောင်မှ ကိုယ်လဲ မကောင်းတာ မဖြစ်အောင်၊ သူများတွေလဲ မကောင်းတာ မဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တယ်လို ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တှောလည်း ဖတ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲလာလို့ သိပ်တောင် မဖတ်ဖြစ်တော့ပာဘူး။ ဒောသတွေလည်း ထွက်ရပာတယ်။ ပြသဿသနာတွေလည်း ဖြေရှင်းရပာတယ်။ ကွန်မန့်တွေကို ကျွန်တှော ဘယ်တော့မှ မဖျက်ပာဘူး။ ဖျက်ရင်လည်း ဖျက်တယ်ဆိုပြီး ဝိုင်းဆှောကြဦးမှာမို့ ရေးချင်ရာရေး Setting ထားထားပာတယ်။ ကျွန်တှော့ဆီက ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတာ ကျွန်တှော မသိပာဘူး။ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အရာလည်း ကျွန်တှော့ဆီမှာ ရှိချင်မှ ရှိပာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တှော ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ မပတ်သက်သလို ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေတယ်။ ကျွန်တှော့ လမ်းကြောင်းပှောမှာ ကျွန်တှော လျှောက်တယ်။ ပြောရရင် ကျွန်တှော အဲဒီပိုစ့် တင်လိုက်နိုင်တာကို ဂုဏ်ယူပာတယ်။ ဒာပေမယ့် အခုလို ဆဲစာဆိုစာတွေနဲ့ စစ်တလင်းကြီးလို ဖြစ်သွားရတဲ့ အတွက်တော့ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမိပာတယ်။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပာတယ်။
Posted by NLS at 4/19/2010 12:22:00 AM 40 comments Links to this post
Labels: Diary, Thought
မနေ့က ဗုံးကွဲတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တှောတို့ သူငယ်ချင်း ရေကြောင်းသိပဿပံ (CD26)က ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ အေးကိုကိုမောင် (အင်ဂျင်ငှက်ကြီး) ပာသွားတယ် ဆိုတာ ဒီနေ့ သိရတဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းများ ကိုယ်စား အထူးပဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပာတယ် ခင်ဗျာ။ :( ကျွန်တှောတို့ ရေကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဇှောထက်ကျှော ဆုံးပားပြီးတဲ့နောက် ငှက်ကြီးဟာ ဒုတိယမြောက် ကွယ်လွန်တဲ့သူ ဖြစ်သွားပာတယ်။ ငှက်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိ လားပာစေ။
Posted by NLS at 4/16/2010 05:33:00 PM 22 comments Links to this post
Bomb blasts infront of X2O Mandap, Kantawgyi
ကန်တှောကြီး X2O မဏဿဍာပ်မှာ ဗုံး နှစ်လုံး (သို့) သုံးလုံး ပောက်တယ်။ မဏဿဍာပ်ပှောမှာ ပောက်တာ မဟုတ်ဘဲ အောက်ကနေ ပောက်ကွဲတာ ဖြစ်ပာတယ်။ ပထမတော့ လူတွေက DJ လုပ်တယ်ထင်ပြီး သိပ်ပြီး သတိမထားလိုက် ကြပေမယ့် နောက်အလုံးတွေမှာ လူတွေအားလုံး ထွက်ပြေးကြပာတယ်။ X2O မဏဿဍာပ်ဟာ လူစည်ကားတဲ့ မဏဿဍာပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပာတယ်။ လူတွေ ဝရုန်းသုံးကား ထွက်ပြေးကြတော့ ထိခိုက်လဲပြို လူပိပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့ သူတွေလည်း မနည်းပာဘူး။ ပောက်ကွဲတဲ့ အနီးအနားက လူ ၄-၅ ဦးလောက် သေဆုံး တယ်လို့ သိရပာတယ်။ (နောက်ဆုံးရ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က လူ ၃၀ ခန့် သေတယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ ဖြစ်ပွားချိန်မှာ သေတာ ဆယ်ဦး လောက် ဖြစ်ပာတယ်။ အနီးအနားမှာ ရှိနေတယ့် အရာရှိကြီး တစ်ဦးလည်း ဗုံးထိမှန်တယ်လို့ သိရပာတယ်)
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာက ကျွန်တှောတို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ စစချင်း လူတွေ ထွက်ပြေးချိန်မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သလိုလို၊ ထရန်စမှောမာ ပောက်ကွဲသလိုလို မရေမရာ သတင်းတွေ ဖြစ်လာပေမယ့် ခဏအကြာမှာတော့ ရဲတွေ၊ လုံခြုံရေးတွေ၊ မီးသတ်ကားတွေ၊ သူနာပြုယာဉ်တွေ ရောက်လို့ လာပာတယ်။ အဲဒီမဏဿဍာပ်က လူတွေအားလုံးကို ဆင်းခိုင်းလိုက်ပြီး ပတ်ပတ်လည်ကို လုံခြုံရေး ယူလိုက်ကြပာတယ်။ အနီးအနားက Black Culture, Black Jack, 16.9, စတဲ့ မဏဿဍာပ်တွေလည်း ပိတ်လိုက်ကြရပာတယ်။ သူနာပြုကားပှောမှာ အမျိုးသမီးငယ် ရှစ်ဦးခန့် ပာသွားတာကို မြင်လိုက်ရပာတယ်။ မဏဿဍာပ်ဘေးနားက ဈေးသည်များနဲ့ မဏဿဍာပ်က ရေကစားသူများကို မေးမြန်းချက်အရ ဗုံးကွဲတယ်လို့ အတည်ပြုချက် ရယူလိုက်နိုင်ပာတယ်။
မဏဿဍာပ်မှာ လူတွေ ပြေးပြီ
ရဲတွေလည်း ဘာလိုက်လို့ လိုက်ရမှန်းမသိ
အထဲမှာ ကောင်မလေး ရှစ်ယောက်လောက်
အခင်းဖြစ်တဲ့ X2O မဏဿဍာပ်
မဏဿဍာပ်ရှေ့မှာ လုံခြုံရေး အပြည့်
သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူတွေကို သယ်ပြီ
တခြားမဏဿဍာပ်တွေလည်း ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ
လူနာတင်ယာဉ်လည်း ခက်ခက်ခဲခဲ လာရတယ်
လူ/ကား ဘာကိုမှ ဖြတ်ခွင့် မပြုတော့
ရဲတွေ ရောက်လာတာ မြန်တယ်
ထွက်ပြေးကြတော့ လူပိပြီး ဒဏ်ရာရတဲ့သူတင် မနည်းဘူး
ရဲကားတွေလာတော့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြတယ်
လူတွေလည်း ဘာဖြစ်မှန်း သေချာမသိတော့ အုံကြည့်နေတာပဲ
ဘယ်သူဖောက်ဖောက် ပြည်သူလူထုကို ဒီလို အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ ဒုကဿခပေးတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချပာတယ်။ သကြဿငန်ဆိုတာ လူတိုင်း စိတ်မွန်းကြပ်မှုတွေကနေ ထွက်ပောက် တစ်ခုအနေနဲ့ ပျှောကြ ရွှင်ကြတဲ့ ပွဲပာ။ အပြစ်မဲ့ လူတွေနဲ့၊ ရန်ကုန်ကို ဦးတည်ပြီး တိုက်ခိုက် နေတာကတော့ လွန်စွာမှကို အကြည်းတန် လွန်းပာတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းဌာနက လူ ၂၄ဦးထက်မနဲ သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုပာတယ်။ ကျွန်တှောတို့ မျက်မြင်အရ အဲဒီလောက် မရှိပာဘူး။ [Reuter]
မြန်မာ့အသံက ယောက်ျား ငားယောက်နဲ့ အမျိုးသမီး သုံးယောက် သေပြီး လူ ခုနစ်ဆယ့်ငားဦး ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ကြေညာပာတယ်။
မြန်မာ့အသံက ယောက်ျား ငားယောက်နဲ့ အမျိုးသမီး သုံးယောက် သေပြီး လူ ကိုးဆယ်ကျှော ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ ကြေညာပာတယ်။
Attention: All photos and post are not allowed to republish on any kind of media without my personal permission!!!
Posted by NLS at 4/15/2010 04:21:00 PM 566 comments Links to this post
Labels: News, Selection
2010 Yangon Thingyan Photo
Youth Computer's Interview